Chii chiri nani pane mutambo wemahara? Zvakanaka, hapana chakawanda. Kunze kwekunge zvichingotyisa uye watambisa nguva yako yekutapira kuti uzvidire.
Chokwadi, hazvisi kuzokubhadhara chero chinhu, asi izvozvo hazvireve kuti zvakaringana kungotenderera nemitambo inotyisa yakasununguka nekuti mugadziri wacho haakwanise kukubhadhara chero chinhu pairi muhana yakanaka.
Saka iwe unofanirwa kuitei nazvo? Zvakanaka, isu tiri pano kuti tikubatsire nezvose izvo - asi usati wapinda mune yakanaka gallery kutenderedza kuti uwane kurudziro, heano zano rekufunga nezvazvo.
Kutanga, funga kuti imhando ipi yemutambo waunoda kushandisa nguva yako pane. Nguva, mune iyi kesi, yakafanana chaizvo nemari pano. Iwe unoda here mutambo unokurumidza kuti unogona kutamba nyore, kana chimwe chinhu chinenge chiri kuwedzera mukati-kudzika?
Kana chiri chekupedzisira, saka uchafanira kubvuma kuti iwe unofanirwa kutarisa zvimwe kushambadzira kana-mukati-programu kutenga kuti uwane zvinhu zvakanaka, sevanyanzvi vakawanda vasingade kupa nguva yavo yemahara.
Nekudaro, kune zvimwe zvinoshamisa zvakashamisa kunze uko zvakare - vamwe vanhu vakanaka vanopedza maawa akawanda vachibhadhara mitambo yehungwaru iyo yavakangokurega uchitamba mahara.
Uyezve funga nezvemhando yemitambo yaunoda iwe foni yako - kana iri mutambo wakasimba-yakawanda iri kurapwa kwekuona, haisi kuzove yakanyanya kushandiswa pafoni iyo inouya kubva makore mana apfuura uye ine diki yekuratidzira.
Ndizvozvo, unowana zvese izvo? Kunaka - iwe unofanirwa kuwana kupwanya uye kutsvaga kuti ndeapi mazita akakodzera iwe. Tora wako akaroora kana zvigunwe zvichitsvaira… isu tinovimbisa kuti pachave nechimwe chinhu chaunofarira mukati umu.
Flipping Legend ndeye inomhanya isingagumi mumhanyi yakapunzirwa muRPG-senge yekukwiridzira system. Iyo protagonist inosunga orgy yekuparadza inodziya nenzira chessboard, uye inogona kungokwakuka neipi.
Izvi zvinotanga kuita kuti musoro wako uturike, zvisingaite nekuti iyo nzira ndeinopararira. Izvi zvinoreva kuti kana uchisvetuka kubva kuruboshwe rweruboshwe, iwe unodzoka kurudyi - chimwe chinhu chaunowanzo kushandisa, kudzivirira njodzi dzakawanda munzira yako.
Kuenderera mberi nekuomesa zvinhu, yako hutano bar inodzika pamwero unotyisa, uye inongomufadza kana iwe uchihaya vavengi. Bata zvakakwana bling uye iwe unokwanisa kuvhura masimba-kumusoro ekutora vavengi vazhinji.
Iine ruzha runoshanda simba, boka revamwe mavara, uye yakangwara chunky hunyanzvi dhizaini, Flipping Legend inoratidza kuchine hupenyu hwasara mune vasina magumi mamhanyi (nyangwe gamba rakabatikana kuuraya zvese zviri mune ino).
Hoggy 2 iri papuratifomu inonzwa kunge yapukunyuka kubva kuNintendo console. Nzvimbo iyi inosanganisira iyo yakaipa mwedzi Varume vanobira vana vepa blobby magamba. Iwe unofanirwa kuwana pakange pakavanzwa vana, kumwe mukati merimwe maze makuru azere nembiya.
Mbiya yega yega inogara inoruma-hukuru hwakakura hwakazara nemapuratifomu, vavengi, misungo, uye michero. Idya michero yese uye unopihwa kiyi. Unganidza maki akakwana kuvhura nzvimbo nyowani dze maze.
Iwo mabhendi epuratifomu anowanzo fisita. Matanho ekutanga anokuregedzera mukati, asi iwe uri kutarisana nemiedzo inoita kunge isingabvumike kusvikira waona chimwe chinhu chakakosha - bharanzi iwe rausina kumboona, kana yakarongeka nzira yekusvitsa zvinhu - ipapo iwe unonzwa kunge munhu ane hungwaru.
Iwe unofanirwa here zvakanaka ese ese 200 mawoko akagadzirwa-ruoko, iwe unogona kugadzira yako mumatanho edhita, kana kutora pane iyo Hoggy nharaunda yakagadzirwa. Kuti izvi zvese zvinouya zvemahara zvinokatyamadza. Dhawunirodha izvozvi.
Drop Wizard Tower iri rakakurumbira rakarongedzwa rudo tsamba kune yakasara isina-screen arcade chikuva mitambo senge Bubble Bobble. Iwe unofamba famba, uchidzinga vavengi, uchibata matombo nemichero, uchimhanyisa mabhudhi, uchishanda munzira yako kusvika kune yekupedzisira kutarisana.
Nekudaro, pane twist mune iyo Drop Wizard Tower fuses yekare-chikoro chekumhanya ne auto-kumhanya. Wizard yako nyowani haimbomira kufamba, uye inogona kungotungamirwa kuruboshwe kana kurudyi. Uye anongopusha chete pakarepo iye anowira papuratifomu.
Iwe uchave uchirwisa izvi pakutanga, uchituka Kudonha Wizard Shongwe yekutsauka kubva kwechinyakare kuruboshwe / kurudyi / kusvetuka / kutonga kwemoto. Asi mutambo wacho unoshanda chaizvo parunhare, uye kana wadhiza unenge uchiuya uchiuya pamusoro, vavengi vanoshamisa neWanga yemashiripiti, uye uchivabaya kuti vagadzire 'zvirahwe' zvevavengi.
Timber Tennis ichinyatso souped-up Pong. Vatambi vaviri vakatarisana, vachitumira bhora nekudzoka. Nekudaro, Timber Tennis inoridzwa kupfuura 'munzira' shanu, mukufunga kuti inoita kubata kubata kureruka kukwikwidza bat yako kupfuura mune yakasununguka-fomu Pong.
Iko Timber Tennis inosiyana neyavo yekurudziro yechinyakare iri munzira yaunofamba nayo. Anopikisa haambombopotsa pfuti, kusvikira iwe wagadziridza Super Shot bar yako, panguva iyoyo iwe waizenge sekondi kuti umise museve unonwisa mvura kuti utange kurohwa. Budirira uye iwe unokunda. Tumira kumusoro uye mutambo wako wapera.
Timber Tennis haina yakadzama, asi zvichiri nyore kuda. Inotaridzika zvikuru, ine matare akasiyana siyana uye mavara, inonakidza mune pfupi kuputika, uye ine mimhanzi yakanaka kwazvo. Iyo inotsamwisa inotsamwisa, zvisinei, inoda kukwenya nemabhora asinga peri tenisi, kusvikira zvese zvasara inyaradzo yakanyarara. (Neraki, unogona kumubvisa nekumudzikisira manzwi.)
Touchdowners zviri, zvakanaka kutaura, kwete an zvachose kutandara kwakanaka kwenhabvu yeAmerica. Pano, mapoka maviri-akasimba (kazhinji munhu, asi dzimwe nguva mapfupa kana huku), vakatarisana, maoko avo achiputika zvakashata pavanenge vachifamba. Zvakare, gomba rinoratidzika kunge rakakura trampoline.
Kana iwe uchigona kurwisa trio yako yekubatanidza mukuzviisa pasi, iwe unogona kuwana kubata. Kana rimwe divi rikawana rimwe: mutambo pamusoro. (Kunze kwekunge iwe uri muCustomer mode, ipapo iko kutanga kune vatatu - kana kutanga kune vashanu mukupedzisira.)
Izvo zvese zvakapusa zvachose, asi - zvakanyanya kufanana Kupopota uye Dunkers, neboka rimwechete - mizhinji yemaranzi, inonakidza mhepo uye inonakidza. Ingotarisira kuve unobata mwoyo unotevera paunotarisa mutambo chaiwo, uye Miami Dolphins haasi kubhururuka nemhepo, achidemba kudzivirira kurwiswa kubva kuchikwata chevarwi chaivo.
Ballz yakasviba uye isina tsvina, asi zvakadaro inokwanisika kuita mesmerize, nemusanganiswa wepfungwa dzakakweretwa kubva Breakout, vanomhanya kusingaperi, uye Angry Shiri.
Unosungira bhora rako kumadziro emadziro akavezwa, uye rinofamba-famba usati wauya kuzorora pasi pechiso. Nhamba imwe neimwe inoreva kuti kangani bhata inofanirwa kurohwa isati yanyangarika, uye maburi ese anofamba achienda kumberi imwe nzvimbo bhora rako parinomira kufambisa.
Nekufamba kwenguva, unounganidza mabhora mazhinji - ese anodzingwa kamwechete - asi nhamba dze blockchain dzinowedzera kupikisa kurwisa chero mukana mutsva waungave uinawo.
Iyo fizikisi haina kujairika uye isina tsarukano, chirongwa chakanangwa ndechekunyepedzera, uye aesthetics yakakosha, asi Ballz haina kukombamira sezvo iwe uchiita zvishoma nezvishoma mafashoni uye kusunungura maketeni makuru emabhora. Yakawanda kupurasitiki, uye ichave yakasarudzika; sezvazviri, ichiri freebie yakanaka.
Sonic The tyoni haina kumbobvira yaitika pamwe neiyo nguva-mukwikwidzi Mario. Ipo mascot aNintendo achiri kuratidzwa mumapuraneti ekutanga, Sega yebhuruu hedgehog inowanzo kuve yakarongedzwa mune freemium rubbish. NaSonic Hedgehog, zvakadaro, iwe uri kutora yekutanga yeGenesi / Mega Drive yekirasi.
Muchokwadi, iwe uri kuwana zvimwe. Iyi haisi yemahara simulator, asi mutambo wakazadzikiswa zvizere, uine hutano hwekuita uye hwakafararira 60fps mavheti. Kunyangwe kubata kwakabatana dzimwe nguva, kuchengetwa kwakatorwa pamwe neyakagadzirirwa pachiratidziro macomputer, uye pane gamepad controller rutsigiro, zvakare.
Kunyanya kukosha, mutambo wacho pachawo unoramba uchimanikidza, naSonic anotora achiuya pamusoro pemavara akajeka akazadzwa nemapuratifomu, misungo, zvindori zvegoridhe, kutenderera vavengi, kusanganisa loops uye tunnels, uye dzimwe nguva mukuru. Retro-yemitambo inowanzoodza mwoyo, asi Sonic inomira muedzo wenguva. Dai chete mitambo yese yekare yaive yakagadziridzwa mbozhanhare nekutarisirwa kwakadaro.
Simudza Rusvingo yakakodzera zita kupiwa kuti zvimwe chido kutyaira unopenga. Iyo autorunner ine yakashata streak, asi zvakare imwe yakakomba dhizaini smarts.
Iwe unotanga nekusarudza hunhu kubva kumashini emawoko, uye ndiyo inosarudza kuti ndeyipi nyika yawakadzika mairi. Unogona kunge uri dhadha yerabha rinoputika nematare emagetsi ekugezesa, kana dehenya riri kubuda negehena remoto.
Chinangwa: kusvika kumagumo enzvimbo yakagadzirirwa-ruoko kuti uwedzere hunhu kuunganidziro yako.
Kunyangwe iwo anonzi "nyore 'mazinga akaoma, uye swipe control pane dzimwe nguva ingangoita ff. Asi iyo matatu matatu anooneka, musoro-uchibika odhiyo, uye dzakasiyana-siyana isometric yenyika dzakapepetwa nemisungo inonyengera icharamba ichidhonza iwe kumashure.
Mutambo uyu unobhururuka chess mumusoro waro mune yakanakisa fashoni, nekuvhiringidza kutenderedza nezvimedu kwete zvebhodhi.
Pakati pekutanga kwako enda ku Chaizvoizvo Bad Chess, iwe unogona kuongorora izvo zviri pamberi pako uye nekukasira kusvika kumhedziso iwe une mashoma emawere. Mupikisi wako, nekupesana, achava nekushomeka kwekufungidzira kwezvimedu zvakanaka.
Ichi chinangwa. Mune Chaizvoizvo Zvakaipa Chess, kugona kweAI hakuna kumbochinja, asi zvidimbu ndizvo. Paunenge uchivandudza, iyo yekutanga inofamba.
Gadzirira chaizvo uye uchafanira kutora pakombiyuta nemurwi wep pawns apo ichirwisa iwe nemapenji akawanda sezvaanogona kutiza kuenda nawo.
Yemahara, iwe unowana zvakare zuva nezuva pikicha uye maviri edza kuirova. A $ 2.99 / £ 2.89 IAP inovhura yakawanda yemunharaunda uye inobvisa kushambadza.
Mutambo uyu unoitira zvekumhanya zvinoitwa nevamhanyi-mamhanyi mitambo yemapuratifomu. Rimwe Tap Rally inodzorwa nemumwe chigunwe, kudzvanya pachiratidziri kukurumidza uye kusunungura kubhuroka, uku mota yako ichimhanyisa otomatiki. Icho chinangwa hachisi chekurova mativi eiteti, nekuti izvo zvinodzora iwe pasi.
Mukunda uye iwe unokwidza kumusoro maseraidhi, wobva uchitamba yakasimba, mudzvinyiriri anokurumidza. Mukubata kwakanaka, vanoti vanopikisa marekodhi ezvivakwa zvepasirese zvepasi nevamwe vatambi, zvinowanikidzwa nenguva.
Mukukosha, iyi idhijitari inotora pane slot-racing, ipapo, pasina iyo slots. Asi iko kusanganisa kweanomhanyisa uye nzira, pamwe chete neyakagadzika renji remateki, anokuita kuti ukanganwe pamusoro penyaya dziri nyore kudzora. Kana paine chero chinhu, vanova boon, vachichinjisa tarisiro yekudzidza track layouts uye reza-inopinza nguva. Zvepamusoro zvinhu.
Pfungwa iri shure Yero ndeyekuita kuti skrini ive yero zvachose. Iyo inopinduka ndiyo mutambo une 50 nzira dzakasiyana dzekukugonesa kuti uite kudaro, asi imwe neimwe nhanho inopa hapana inkling yeiyo nzira inodikanwa.
Pakutanga, kufambira mberi kwakakurumidza, paunenge uchipuruzira skrini, uchisimbisa dota kutenderedza Angry Shiri-dhizai kuzadza gomba, uye ipapo grin paunoona iwe unofanirwa, semuenzaniso, pira pani yema disc nerwiyo rwekupururudza kumusoro .
Gare gare mazinga, zvakadaro, pane dzimwe nguva nemaune - uye pamwe zvinyoro nyoro - fungidzira. Iwe unogona kuwana matipi, kubhadharwa nekuona kushambadza, asi kuzviita unonzwa sekubvuma kukundwa mune ino shomashoma uye akangwara anodhiraivha.
In Silly Sausage: Imbwa Dessert, canine yakasimudza nyika inozviwana ichiedza kupidigura nepakati pekeke, chokoreti, ice cream, uye nhamba inoshungurudza yemasipiresi, ma-blade, uye mabhomba makuru.
Panzvimbo pekufamba kunge yakajairika pooch, gamba re furry remutambo uyu rinotambanudza paunenge uchisenda, kusvikira paws yake yepamberi inogona kubatirira pane chimwe chinhu. Pasi pake anobva adzosera munzvimbo. Ihwohwo hunyanzvi - asi zvakare nengozi kana mumwe mugumo wemuviri wake ukaguma wave munjodzi apo imwe mhedzisiro iri kure zvinoshungurudza.
Iko kune 50 masheti mune ese, pamwe chete nemakamuri ebhiza emakamuri ekuedza uye kurova. Uye kunyangwe mamwe mabhisiki akazoita mutambo uyu pamwe achanyanya kuyedza, uyu sezvese unonaka kwazvo, unogutsa arcade kurapa.
Zero manongedzo ehunyanzvi mukati Binary Dash, ino iri imwe side-yekupenya auto-mumhanyi kwaunopfura kuti usvetuke, uye tora kumwe kumwe kunongedza kumusoro-pasi.
Asi mapepa akawanda ekubatanidza kweiyo super-kukurumidza gameplay, yepamusoro-soro dhizaini, uye inoonekwa inoisa mhino yayo kune yemazuva ano penchant ye mid-80s pixel art, panzvimbo pezvo ichikudzosera kumashure kune inotyisa michovha yemanheru 1970s kutamba.
Ehe, Binary Dash yakawanda inoratidzika sokunge yakacheneswa kunze kwekare Atari console, asi zvakadaro ine Quirky charm. Uye mutambo wacho pachawo wakanaka. Inokugadziridza zvinyoronyoro, ichikubatsira kusvika pakubhururuka nepamusoro nepazasi pezasi, nekudaro ichitenderedza mbiru-dzinopedza mutambo mumakomba kusvetuka kana iwe uri padivi-pasi.
Pasina nguva refu, zvakadaro, zvigunwe zvako zvichakwikwidzwa zvakanyanya neiyo thata choreography inodikanwa kusvetuka uye kururudza nzira yako kumagumo emazinga anotevera.
Iwe pamwe haungazove unofara mutengesi kana ukamanikidzwa kutora mutsara mukati Chitima Chisingaperi kaviri zuva nezuva.
Pano, chitima chekatuni chinomhara munzira uye chine mabatani akawanda mairi pane zvinoita senge zvine musoro. Iwe unofanirwa kushambira munzira yakakodzera kuti ive nechokwadi chekuti chitima chinotendeuka nenguva, pane kupaza nekupa iye anofuratira chikonzero chakanaka chekubvisa.
Munzira, iwe unogona kubata zvigadzirwa zvemari uye makatuni, uchikurisa mapipi anodiwa kuti uvhure makanda matsva, mamwe acho anoshamisa kwazvo. (Zvitima zvinova matatya makuru ndiwo mashoma pazviri.)
Izvo zvinowana zvishoma zvakafanana, uye iyo online yakawanda inoridza inodakadza, asi isingagumi Chitima chakanakira kuputika nekukurumidza, uye kana ukarwara nemamiriro asingagumi, kune matanho-akavakirwa kumatambudziko ekugadzirisa.
Iine ina-ina-ina gidhi uye penchant yekukurumidza kudzora nhandare yemitambo, Topsoil inosangana zvishoma senge horticultural Miti! Iko hakuna makadhi ekutsvedza pamusoro, zvakadaro - pachinzvimbo, iwe unounzwa netambo yezvinhu yekudyara, uye dhizaina nzvimbo dzakashama dzekuzvinyudza pasi.
Mushure mematatu, iwe unowana mukana wekukohwa - uye ndipo panotangira zvinhu. Iwe unowana mamwe mapoinzi ekukohwa zvidyarwa zvakawanda kamwechete, izvo zvinoda kuti zvive munzvimbo dziri padyo. Asi pakukohwa chero chinhu, ivhu riri pasi rakashandurwa. Masosi ejecha pakati pebhuruu, yero, uye girini, uye mapoka ezvirimwa haakwanise kuyambuka ivhu rakasiyana.
Mhedzisiro yacho mhedzisiro mutambo wakangwara apo iwe unofanirwa kuronga kumberi, uye kwaunoramba uchichera kune matanho ekuti ugare kwenguva yakareba uye uwane zvidyarwa zvitsva kuti zvikure uye kukohwa.
Zvinotora zvakawanda kuti utore-based puzzle puzzle mutambo kubuda. NeoAngle's stark Visual vari kusunga, asi ndiyo nzira yaunofamba uchitenderedza isometric lands inoita kuti mutambo uve wakasarudzika.
Chaizvoizvo, protagonist irimukati mativi inopinda mukati medzidziso kana ichifamba, ichisiya nzira munzira yayo. Nzira yacho yakasimba uye haigone kuyambuka zvakare. Kubuda kunotyisa ndiko kwaunofanira kuenda - asi chete mushure mokubata matombo munzira. Uye matombo aya anogona kuve akanamirwa kuseri kwemasuo akavhurika achishandisa switch, kana kuve kuseri kwetelporter.
Munguva pfupi, iwe uri kuyedza kufunga iyo labyrinthine nzira yekukunda, uchishamisika kuti sei mumwe munhu angafamba rwendo kuyambuka imwe chete-screen neon gidhi rakawanikwa - uye zvakadaro riveting.
Yet imwezve mu-the-screen isingaperi mumhanyi, achiisa Temberi Run. Yawn. Chete Sky Dancer ine chimwe chinhu chinoita kuti urambe uchitamba - uye kuti chimwe chinhu chiri kusiya dumbu rako muhuro mako nguva dzose paunenge uchisvetuka.
Zvizhinji zvezvinhu izvi zviri pasi pekuvakwa kweSky Dancer nyika, iyo inoumbana nemakonzo madiki epasi akasungirirwa mumhepo nenzira iyo mabwe haawanzove. Sezvo iwe uchizvikanda pamusoro pemucheto weimwe, iwe unofanirwa kukurumidza kukwira kumhara pane pachikuva pazasi.
Kurwa simba uye inertia kunonakidza, kunyanya kana mutambo uchimhanya uye iwe uchiziva kushomekerwa zvisizvo kuchaita kuti iwe usangane ne splattery kupera pagwenga renzvimbo.
Tiri mune Mario-maitiro epuratifomu ndima ne Super Phantom Cat, kunyangwe chete kana iwe uchifungidzira kugadzirwa kwese kwakabvisa toni yeshuga kutanga. Iyo Phantom World inzvimbo yakasununguka, ine hutsinye, izere nemisungo inouraya, bling, uye zvakawanda zvakavanzika. (Mutemo wakanaka kana uchitamba: usambofa wakatenda chero rusvingo rune simba ..)
Retina-kusona art dhiza padivi, mutambo unonzwa kunge wakashata-dunk kune chero fan yea classic mapuratifomu. Dhizaini yakanakira, inopa mubayiro yekudzokorora kutamba, kune nzira dzakasiyana siyana, uye izvo zvinodzora zvinogona kudzoserwa nekuchinjiswa pamusoro kana izvo zvekusavimbika zvichida mabhanana zvigunwe pane chako chinhu.
Izvo zvishoma zvinoshambadzirwa dzimwe nguva, asi kwete kune iyo kusvika panguva yepamusoro iyo inogogodzwa. Zvese mune zvese, Super Phantom Cat ndiyo mitoro yereapy furry inonakidza.
Pinball yakamisikidzwa neDNA yeanopesana neiyo wachi isingagumi mumhanyi inonzwika sekusanganiswa kusinganzwisisike - asi inoshanda. In PinOut's neon world - ine yakanaka yakanaka yemagetsi ruzha - tafura huru inotambanudzira kure kure. Mukati: yakawanda yematafura madiki anosanganisira mafiripiti, ramp, uye kudarika mishoma mishoma.
Chinangwa chakakosha kutendeuka kwega-kwega kuramba uchienderera mberi kune inotevera mini-tafura - uye nekukurumidza. Zvakakodzera ramp shoti zvakakosha, uye saka kugona mutambo wefizikisi uye kurongeka kwematanho ayo akasiyana matanho kunokosha.
Kune vamiriri, ichi chiitiko chitsva pane pinball inoshanda zvine hunyanzvi mune yefoni mafomu. Uye kune vatsva, PinOut inosunungurwa kubva kune yakajairwa arcane mitemo yepinball, asi ichirasikirwa neiyo yeiyo frenetic kufara.
Kuuya senge Super Hexagon kwakanyura pamwe nemapundu. Polywarp iri neutsinye yakaoma Arcade ruzivo iyo zvakare ine maddeningly inomanikidza.
Izvo zvekutanga zviri nyore: polygon yako inogara pakati pechidzitiro, uye madziro akavhara mukati kubva kumapeto. Nekutora kuruboshwe kana kurudyi-ruoko rwechidzitiro, zvinoteedzana, iwe unoderedza kana kuwedzera yako polygon's kumucheto kuverenga, kuenderana neinotevera chimiro icho chiri kuda kukupwanya.
Zvese zvinofamba nekumhanya uye zvinopopota pamusoro, sekunge uri kutamba mumuchina wekushambidza wakarongedzwa nehuwandu husingagumi hwemhando dzakakwirisa.
Pakutanga, Polywarp anonzwa kunge asingabviri, asi iwe munguva pfupi iwe unoziva maitiro ekuzvipira mundangariro uye tenzi. Kwekupedzisira 60 masekondi uye iwe uchanzwika semumhanyi - kusvikira iwe waona nyowani, yakasimba nzira yakamirira kunyadzisa makanda ako.
Imwe yemimwe mitambo isinganzwisisike iwe yaunokwanisa kuisa pane yako Android kifaa, Cubway inosanganisira pamusoro pe50 nzvimbo diki dzaunodarika senge tsvuku tsvuku.
Chinangwa ndechokungoita chinangwa, asi mhando dzese dzezvinhu zvinodzivirira nzira yako uye kupindura kuvapo kwako munzira dzakasiyana siyana. Iwe unofanirwa kufunga kuti ungavapfuure sei ivo vese, kunyangwe zvichidzikiswa maererano nekufamba - kumberi kana kuseri kumashure ndiyo sarudzo dzako chete, kunyangwe iwe uchigona (uye kazhinji uchafanirwa) kumira, kufambisa zvishoma, kana kudzosera kumashure, zvichienderana nengozi isati yasvika. iwe.
Paunenge uchifamba, nyaya yemhando inoratidzwa, kunyangwe iwo mavara achiverenga seanga asingazivikanwe rubatsiro rwekubatsira. Zvikasadaro, Cubway ibudiriro - intuitive, ma mechanics acho ari mutsva uye akangwara, uye aesthetics haina undalteringly muchadenga.
Ese huku dzakabatwa, uye saka mukuru-hen Cluckles anoenda kunovaponesa, akashongedzerwa nerudzi rwemabakatwa vanhu vazhinji vangashamisika kuwana vakavanda mune henhouse.
Kubva pakutanga, Cluckles 'Kuzeza is a retro platformer zvikuru - ese chunky mifananidzo, nharaunda engular pamwe nevavengi vanofamba vachidzokera kumashure, uye chisingaregereri chimiro.
Asi kunyangwe kufa chaiko kungagona kuisirwa (sezvazvinogona kuita kubhatika bhatani, sekunge rakagadzirirwa zvigunwe zvebhanana pane chero chinhu chiri pamusoro petafura yemasendimita manomwe), zvakaoma kuti ugare wakapenga pane zvese zvimwe.
Izvo zvinoonekwa zvakashata uye zvakagadzirira asi zvizere nechitambi. Uye chakanyanya kukosha ndechekuti dhizaini yakangwara, zvichiita kuti kuve kwakaoma kusvika pakubuda, asi muedzo wakasimba unofanirwa kuda kununura phukuse.
Ndiyo imwe yemapuratifomu ari nani pane Android, uye imwe yeakanakisa emahara emahara, pamwe nekuve chiyeuchidzo chenguva yakapusa.
Fungidzira Tomb Raider akagadzirwazve sePac-Man, akatsvedza muCrossy Road, akatamba nekukurumidza, uye akapfeka sekunge mate pakati peZX Spectrum circa 1983. Ndizvozvo Bhomba reMask.
Unotamba semhare ichitsvaga 'kusunungura' goridhe kubva paguva, asi anowana mask - uye nekukasira anoisa ipapo. Kusagadzikana pano kunohwina zuva, sezvo iyo maski ichipa iye anopfeka simba rekukwira madziro uye kusvetuka mapundu makuru, zvichimupa mukana wekurwisa kusvika kumagumo ekupuruzira mapako akaiswa nemipendero inouraya, pfuti, nevavengi, nekudzivisa kupenya kunopenya. madziro orufu.
Kunyangwe kutamba kuburikidza neyakagadziriswa-chidimbu kana iyo isingagumi arcade mode, Tomb yeMask ndiyo nyowani, inonakidza, inoshamisika twitch mutambo unoroora zvakanakisa zvekare uye zvitsva.
Kana iwe uri mhando yemunhu angarega kusimuka (ndokugogodza pasi) masheya pane kutamba mutambo chaiwo, Dominocity anofanira kufarira.
Mune ino Arcade inodzvinyirira, pfungwa ndeyokuisa mashoma madiki sezvinobvira kuti usvike chinangwa, uku uchibata goridhe zvirefu munzira.
Izvo zvinongedzo zvinosemesa pakutanga. Unokanda kukanda dhesi pamberi peyokupedzisira, uye isa chinwe chako kuti ikone kana zvichidikanwa, kuti uchinje nzira.
Kunyangwe zvakadaro, kuiswa chaiko hakusi kwenjere, asi kubudirira kunobatirawo pakumhanya. Izvi zvinowedzera kusawirirana kune iyo ingave yaive inonakidza asi isina kusimbisa mutambo, yakawedzera kusimudzwa nekunetseka kwekuwedzera kwenzira nzira dzaunofanirwa kukunda paunofamba kuburikidza nematambudziko eDominocity.
Izvo zvinoenderana neyakasiyana uye yepakutanga chipenga zviri nyore kudzidza asi zvakawoma kugona, zvakanyanya saTetris nemamwe ma greats. Iyo inonakidzwa mune yakapfupika mabhureki, ichiigadzira iyo yakakodzera yekutamba kwefoni.
Imwe yemitambo yakasimba kwazvo, yekuregerera iwe yauchambotamba, Yakashama zvakare inobata kuti iite chimwe chinhu chinonakidza nemidiki blocky nharaunda uye anodzvinyirira mafomu.
Kune yega yega mitambo yemutambo, chinangwa ndechekusvitsa chinangwa na'kufukura 'chimiro chimwe kana zvimwe. Kufambisa kwega kwega kwaunoita, chimwe chechiso kwechimiro chinonyangarika, zvichikusiya uine chero zvasara kuti uwedzere kutendeuka, uye unogona kungofamba munzira kana uine kumeso kwakashata kunongedza nenzira iyoyo.
Pakutanga, iwe unogona kuita ese marudzi evanopaza uye uchiri kuzadzisa chinangwa. Asi pasati papera nguva, zvimiro zvinova zvakaoma-mativi- mativi zvinhu zvinorangarira zveTetris zvidhinha, zvichida kuti iwe ufunge nekuchenjerera nezve marongero ayo mativi avo asina kufambiswa uye nenzira dzaunotora.
Tumira kumusoro uye iwe unogona kugadzirisa kana akawanda mafambiro sezvaunoda. Kunyangwe izvi hazvisi kushungurudzika, iyo rewind rekuratidzirana iri kuve ichifadza kunyange kana iwe wakambozviona kakawanda padanho rakanyanya kuoma.
Uyu uyu kure nemutambo wakaipisisa, asi unoratidzira ikati inonzwisa tsitsi katsi. Chaizvoizvo ndeye yakatarwa yakapfava mini-mitambo, inoyeuchidza yeNintendo's WarioWare nhepfenyuro, chete pano, vanoisa miffed moggie iyo ichakurumidza kuve kune imwe nzvimbo - chero kupi - kumwe.
Imwe neimwe miniature inonetsa mukati Grumpy Cat Yakaipisisa Mutambo Kubva inogona kunzwisiswa nekukasira - kukamisa nhambo pane laser pointer nekutapa iyo skrini; kupfura katsi kumusoro kumusoro kuchengetedza kadhibhokisi bhokisi rezviroto; kudzvanya mabhatani akaumbwa kuti akunde nzira uye osvikira hove.
Iyo dzakasiyana-siyana mini-mitambo inoita kuti irambe iri nyowani uye inonakidza, uye mutambo wacho kazhinji unonyemwerera kutungamira nekuda kwemusanganiswa wawo weakavaravara, ludicrous concepts uye nekusingaperi akatsamwiswa feline.
Iyo yakareba iwe yaunorarama, inokurumidza uye inodikanwa zvinhu zvese inova. Kukundikana uye iyo grumpy katsi scowls, asi iwe zvakare kupihwa mari yekuwana mitambo mitsva nenzira yetsvimbo yakahwinwa kubva kumuchina wemubhadharo. Nomuzvarirwo, chimwe nechimwe chazvo chinoratidza kitsi yeguku.
Zvakawanda kana zvakaderera mumhanyi anomhanya mumugwagwa une nzira shanu, Cubed dziite World Zvese zvinechekuita mabhanhire, kufamba kuruboshwe uye kurudyi kunzvenga chero chinhu munzira yako. Kupukunyuka kwenguva yakareba mune ino isometric landscape uye iwe unorova iyo checkered mureza, umo mchembere-yakatarisana mukurumbira uye rombo rakamirira.
Asi zvinhu zvinonyanya kunakidza paunobata mari en-nzira uye wotanga kutenga mota nyowani pamutambo wemba yemutambo. Mota yega yega inodzikisa izvo zvinoonekwa uye nenzira yaunokwikwidza nayo - dhongi remarara, semuenzaniso, rinogona kusvetuka zvinoshamisa pamusoro pemakomo ane jecha kune iyo UFO inoshungurudza mombe dzemapurazi kuwedzera mamwe akasiyana siyana mumhando yemutambo wekare.
Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti mota imwe neimwe yaunotenga, chikamu chitsva che track chinowedzerwa kune rally, mota yaunodzora ichingochinja ipapo paunenge uchisvika panzvimbo iyoyo.
Amass muunganidze wakakura uye pane mukana wehuwandu hwezvakakura - asi kupedza iyo rally kunova kwakanyanya kuoma, iyo inobatsira kuwedzera nguva yakareba.
Iyi yemunwe-chigunwe Arcade mutambo unosanganisa wekare slalom faji pamwe neyekutarisa mujaho uye mamepu emepu anoonekwa mune anofarira OutRun. Uchishandisa dijiti rimwe chete, unotungamira chikepe chitsvuku kuburikidza nemvura ye Memento Bay, ichida kuunganidza zvekare zvinyakare. Panopera chikamu chimwe nechimwe chipfupi, iwe musoro kuruboshwe kana kurudyi kusarudza nzvimbo inotevera.
Zvipingamupinyi muvengi mukuru - kupaza mune imwe uye chikepe chako chakabiwa zvekumhanya - kwete chikuru kana uchitamba zvichirwa newachi. Asi iwe unofanirwa zvakare kuve unochenjera nezve museve uri pamusoro wekrini. Izvi zvinonongedza kune inotevera yekutarisa - kupotsa imwe uye iri 'mutambo pamusoro'.
Izvi zvinonzwa kushushikana (chirango chenguva chingadai chiri nani), asi chinokurudzira kudzokorora kutamba. Mushure mezvose, iyo mepu haina kumbochinja, saka dzidza iyo uye inyore izvo zvinodzora uye iwe rimwe zuva uchakwanisa kuseka kuenda kumutsara wekupedza.
Namco's arcade yemhando yepamusoro haidi chero sumo. Asi ingoita kunge wakavharwa mubako kubva maawa apfuura ma1970, Pac-Man inoratidzira iyo inonzi titular protagonist, iyo redund yero muromo uyo unotora madota mumazamu akadhirowewa nemweya yemweya-yakafanana nemhonye.
Chinangwa ndechekudya madhiri uye kudzivirira zvipuka. Bata kupenya kwemagetsi mapiritsi uye iwe unogona kushandura matafura kune avo vanokutsiva - nekuvadya kana vatendeuka bhuruu uye kuyedza kutiza.
Kunyangwe kuve wakadarika makore 30, Pac-Man inoramba iri mutambo unonakidza, uye zvigadziriso zviri nyore (zvakanyanyisa, swipe munzira yaunotevera iwe unoda kutendeuka) shanda zvakanaka pa Android, sezvinoita chrisp chekare-chikoro mavonero.
Yemahara, iwe unowana yekutanga maze uye akati wandei mutambo pazuva. Mamwe mazes anogona kuvhurwa uchishandisa yakachengetedzwa play tokens - kana iwe unogona kutenga akawanda (uye bvisa izvo kushambadzira) nemaIAP akasiyana siyana.
World-kuvaka anotendeuka-based zano akateedzera Kubudirira ndeyemhando yepamusoro, asi nharembozha dzakazara nehurombo zvishoma, vachipa chero huwandu hwevabereki vavo vanogarisana nemakomputa kana kuwanikwa pa-iyo-enda mafoni mazita anodaidzwa.
Hondo Polytopia anowana chiyero chaicho. Unosarudza dzinza, uye unotanga kuenda kuwedzera humambo hwako hudiki. Mauto akagadzirwa, zviwanikwa zvinoshandiswa, hunyanzvi hwakaongororwa, uye vanopikisa vakapwanywa.
Polytopia haisiyo mutambo wepamberi - unofanirwa kuyedza zvishoma kuti uone kuti zvese zvinoshanda sei. Asi iyo katuni stylings inosvikika, uye musanganiswa wevaraidzo nekudzika inopa chiredzo uye kugara simba.
Nounyanzvi, kunewo nzira dzakawanda dzekutamba: wekare-chikoro 'kuuraya munhu wese' kutonga, shoma 30-shandura 'Kukwana' maitiro, uye, kana iyo AI isiri kukuitira iwe, pfuura-uye-kutamba. Uye zvese zvemahara - izvo Polytopia yakakodzera kutonga yako Android mutambo wenguva kwenguva yakareba yakareba.
Uyu akatarisa kupururudza anopfura anotamba nekokorodzano nenzira inopesana nemusoro wako. Izvo zvekutanga zvakajairwa - iwe unodhonzwa mukati memamiriro ekunze ekupenya uye unofanirwa kupfura ZVESE zvezvinhu izvi.
Dzimwe nguva vavengi vanopararira vanokanda mabhonasi zvinhu izvo zvinowedzera chombo chako, zvichimupa nzira yekuburitsa kuparadza kwakakura uchiridzira YUYO-HAA - kana iriyo mhando yako yechinhu.
Nekudaro - uye ichi chikuru 'zvakadaro' - zvese mukati Nguva Locker zvinongofamba chete paunoita. Muedzo ndewe kupisa kumberi, nekuda kwemabhonasi mapoinzi ari kuhwinhwa kuti afukidze madaro akareba, uye nekuti iwe uri kudzingirirwa nechinhu chega chisisasire kana iwe uchinge waita-kusadya chinhu.
Asi kutarisira pane haisi nguva dzose chirongwa chakanaka, nekuti kupomhodza kuita muvengi mumwe kana projectile kunopera mutambo wako. Ngozi inopesana nemubairo, saka, mune iyi nyowani uye yakanaka-yakataridzika blaster inoshinga kuedza chimwe chakasiyana.
Iyi yakanakisa Arcade puzzler inowana iwe uchitungamira traffic nezveguta diki. Mota inopinda nepahwindo, uye unoudzwa painofanira kubva, ichimhanya nenzira yemiseve inonanga. Nyore.
Chete, rino taundi rinotambura neisinganzwisisike kwechinguwe zvisinganzwisisike izvo zvinoreva kuti mafambiro anotevera anodarika apfuura. Pasina nguva, urikugadzira ese marudzi ekuvhara kuti udzivirire kungochinjika nemotokari iwe dzawaifambisa maminetsi apfuura kuenda kunzvimbo yekuchengetedza, izvo zvingazopukuta masekondi kurebesa nguva sezvo iwe wakamirira mota dzakakanganisika kuti dzimhanyire kubuda kwavo.
Kuwedzera kune kwayo, Haangararami komiyuta inosanganisira mharidzo yenyaya ine mavara akawanda, uchitamba munzvimbo dzayo dzakasiyana siyana. Iyo chete musungo pane mobile: unofanirwa kupedzisa mutambo wese muchigaro chimwe. Kana izvo zvichinzwika senge zvakawandisa, imwe-off IAP inovhura mapepa ekutarisa.
Iwo protagonist mu Hop Swap harisi kuva nezuva rakanyanya kunaka, ratopinda munyika isingazivikanwe yepamhepo apo iye pakupedzisira akarasa maoko ake uye akapendwa pendi. Zvakangodaro, anoishandisa zvakanyanya, osunga, achibata matombo, achisvetuka mumamaki, uye osvikira pakutarisa.
Parizvino, zvakajairika (yemutambo wepuratifomu), asi Hop Swap ine hunyengeri kumusoro kweshokwe, pakuita kuti iwe ugare uchikwakuka pazasi pevhu. Panguva iyoyo, iwe unobhururuka kumusoro, kusvetukira kumusoro kusvika kune zvingangoita kuwana kwakawanda kubhinha uye zvakavanzika zvitsva.
Hop Swap inonakidza, inonakidza mhepo mutambo, kunyangwe kana ikanzwa kubata kusinganzwisisike uye kusaterera uchienzanisa nezvinodiwa naMario. Ichowo freebie ine rupo, mukukupa iyo yese mutambo - unongoda kushandisa mari yakaunganidzwa pakutarisa kana iwe uchida kudzivirira kutarisa kushambadza kuti uchengetedze kufambira mberi.
Iyi yekupinda yechitatu mu Super Stickman Gorofu akateedzera zvimwe kunzwa ichinyanyojairana, asi mutambo unosara wakanaka padivi-pane gorofu kuti uwanikwe pane Android.
Sezvenguva dzose, mudiki wako mudiki anotemwa nekurova mabhora nezve kosi dzinosanganisira zviwi zvinoyangarara, zvigadziko zvine laser, nenzvimbo nzvimbo. Iwe unoisa kutungamira kwako uye simba, unorova bhora, uye tariro yezvakanakisa - kunyangwe panguva ino iwe unogonawo kuwedzera spin.
Masimba-kumusoro anosvika pakupinda musanganiswa, achipa mikana yekuwana nzira itsva dzekudzikisa zvikoro zvako. Kune zvekare maviri modplayer modes - yakatemwa-nguva chaiyo nhangemutange uye yakawedzera sedate kutendeuka-kwakavakirwa kudanana.
Iko shanduro yekusununguka ye Super Stickman Golf 3 idiki shoma maererano nenguva imwe chete yemitambo yakawanda yevazhinji uye kusvika kune mitsva zvidzidzo, asi imwechete IAP inovhura mutambo weprimari.
kunyange zvazvo Super Cat Bros Inotaridzika sedzinonzi retro, haina kutamba senge. Chokwadi, pane chezvemuenzaniso chiitiko, senge mumitambo yaMario, nekurova kweAlex Kidd kuongorora, asi izvo zvinodzora zviri pachena nharembozha.
Unobaya kuruboshwe kana kurudyi kwechiratidziro chako kuita kuti katsi yako ifambe (kana rusvingo rusvetukira kana ichinamatira kumadziro), kana peta kaviri kuti dhi (iyo inowana iyo ktitie ichizvikanda yega mumhepo pakusvika pamucheto).
Pakutanga, zvinoshungurudza, asi munguva pfupi Super Cat Bros inova yechipiri chimiro, uye iwe unotanga kucheuka hunyanzvi magadzirirwo emadinky mazinga, uye nekutarisisa kwavanoita iwo mapati protagonists ari.
Zvakare, varidzi vepa Android vanowana kiyi imwechete yekubatsirwa pamusoro pevanhu vakaremerwa ne iPhone: zita remutambo chairo. (Pa iOS, iri Super Cat Tales, nekuda kwekuti Apple sezviri pachena inofunga kuti vashandisi vayo vanogona kuvhiringidza mutambo nezvekati kune imwe ine nziyo yakakurumbira yaNintendo.)
Mutambo weutsinye, wakasvinudza wepamhepo Denderedzwa Kusangana inowana protagonist yayo mune chaiyo kutora pamatunhu egehena - chete pano pane akawanda zvinopfuura mapfumbamwe.
Anosvetukira pamucheto weimwe disc, anokwakukira mukati mayo, uye ipapo anofanira kusvetukira kumucheto wekunze wedenderedzwa rinotevera, rinobhururuka mumhepo. Nguva yese iyi, meno makuru-kunge mabara ari padhuze mukati, uye madhimoni anofamba-famba achidzoka, akamirira kuti iwe utange kubhuroka mukati mavo.
Mitambo inotanga ipfupi, uye Denderedzwa Kunze kwakakusvota parufu, paunenge uchiedza kugona zvakasikwa. Nekufamba kwenguva, iwe unozotanga kupukunyuka kwenguva pfupi, ipapo iwe uchave wakapihwa mibairo mitsva yekuona kwemaziso erudzi uye dzimwe nzira dzekutamba dzakawedzera.
Izvo hazviwanzo kunyange mumafoni ekutamba - kazhinji akazara neyakagadziriswa - kuwana hutsva kutora pane zvinosemesa, asi Kerflux zvinoshamisa nezano rakareruka, rekutanga zano rakanyatsourayiwa.
Iyo crunchy chip-tune inotamba uye iwe unounzwa nematatu waveforms. Mimhanzi inodonha, sokunge kuti uri pasi pemvura, uye ndicho chiratidzo chako kuti utange kushandisa maviri eaya waveforms saka ivo vanosangana kuti vaite yechitatu.
Kuzadzisa chinangwa ichi kwakananga, uye unogona kutanga kupisa kuburikidza nematanho emutambo - kunyangwe kana nhanho inonakidza zvikuru ingangodaro ichizopa mubayiro. Pasina nguva refu, zvakadaro, kugadzikana chero kupi zvako pamusoro peKerflux zvinoita kuti azorore kana mamwe mafungu akawedzera uye iwe uri kubhinya ina yadzo, kuyedza kutsvaga iko kwakabatana kunovhura dambudziko rinotevera.
Kunyangwe ichiita seinooneka uye ine conceptually yakafanana neTetris reverse, uine iwe unobvisa zvidhinha kubva kushongwe. Nhanhatu! ndizvo chaizvo nezve hexagon. Rinovandira pamabhuru, uye harifaniri kuwira pamusoro pemicheto yeshongwe.
Matepi mashoma mukati uye matanhatu! inoita kunge inogona kugara kwemaawa, asi maumbirwo anobatana nenzira dzisina kujairika, uye unogona chete kubvisa imwe panguva. Izvi zvinotungamira kune ane mvere mamiriro ezvinhu apo ako hexagon mavhiri uye anotyisidzira kuti anozvikanda mukati mekuraswa.
Iyo fizikisi ndeyekufungidzira kubata, asi saka uyu hausi mutambo unovavarira kunyaradza-maitiro echokwadi. Panzvimbo iyoyo, unofanira kuverenga matanhatu! Zvakasarudzika zvakasarudzika zvisikwa uye kuedza kutora mukana. Pane kudaro nehunyanzvi, mutambo wacho hausiwo chaizvo waita kana hexagon yako yaenda - iwe unowana masekondi mashoma panguva yekupedzisira 'kufona' kuti zvinyatso bhatira kure kumasara asara uye wedzera kunhamba yako.
Kunyangwe iwe uchitamba magemhu, mashoma acho ari ezve kutamba zvega, mupfungwa yekuyedza neyakagadzika-mamiriro kana mamiriro uye nekuona zvinoitika. Orbit, zvakadaro, ichizviratidzira semugero wepuzzle, inowedzera sandbox rekuti iwe mumvura mune zvinonakidza zvekugadzira madiki solar system.
Mutambo wacho unoridzwa nekupfura zvimatenga zvekudenga zvakakomberedza maburi matema. Ivo ivo vanobva vasiya nzira dzemavara mukati mokumuka kwavo, nepo giravhiti ichiita chinhu chayo. Nenguva isipi, iwe une mapuraneti anosangana pamwe chete, achifamba-famba akatenderedza rimwe kana anopfuura maburi matema, achigadzira hunyanzvi hwazvino hunyanzvi ivo vachiri kudaro.
Izvo zvese zvinonaka uye zvinoshamisa. Iyo chete snag ndeye shambadziro dzinoparadza nguva nenguva, asi dzinogona kubviswa neIAP imwechete.
Kunyangwe ikozvino, makore mushure mekunge Android yazviratidza seyakakura mutambo wekutamba, vamwe vavandudziri vanoita sevanorangarira zvakapusa kubata kwegirazi kuripo. Kana iwe ukafunga kutsikirira kuburikidza nemitambo ine chaiyo D-pads uye mabhatani anogona kuve basa, Muchenjeri Kugunzva: Wemadhireji Okutora ichave chidimbu chidiki chemashiripiti.
Iwe uri wizard, uchidzivirira chivakwa kubva kune maclopers akasungirirwa pamhanza. Kanda zviperengo nekutarisa zvimisikidzo kuti zvifanane nezviratidzo pam balloon uye ndokuti zvishandiso zvekuputika zvinoputika - zvakashamisa varidzi vazvo, avo vanobva vakurumidza kuenda kumugumo. Potsa imwe chete yazvo uye mazuva ako eunisipuni anoitwa.
Kubva pane iyo off, uyu mutsva, unotyisa kupona mutambo, kunyanya kana uchiedza ruoko rwako panguva yekukurumidza-yakanyanyisa mode. Ramba uchitenderedza kwenguva yakareba zvakakwana uye iwe uchave unokwanisa kushandisa zviperengo zvekare, kushandura vavengi kuva matatya, uye kushevedza shato. Izvo isu tese zvatinofanirwa kuita pane zvisina kujairika neChina pano neapo.
Kana iwe uine mafungiro ekutamba anozvitora zvakanyanyisa nguva dzimwe nguva, Maximum Car mushonga wakakwana. Izvi zvinosemesa pamusoro-pekumusoro mujaho ane iwe mbiya mumigwagwa inovhuvhuta, kupurudza vateveri vemitambo, uye kutyaira senge maniac.
Rova mhando imwechete yemotokari kumusoro kwakaringana mujaho dzakawanda uye unogona kuitenga muchitoro, uchishandisa mari dzinowanikwa nekutyisidzira vamwe vashandisi vemugwagwa.
Izvo zvese zvinonzwa zvishoma kunge munhu abvisirwa Burnout, akawedzera chidimbu cheOpRun, uye akabaya mujenya kuburikidza neRego-kunge inoonekwa firita.
Pamwe chete nemuturikiri asina uropi ("Ndine zera rekuverenga rechitanhatu!") Uchiita nguva nenguva sezvaunoshandisa ice cream yako kupaza isingafadzi ichinjika kuti ive smithereens, izvi zvese zvinogadzira kurira kwakashata uye kunakidza kweanomhanya. yakakura mumadhidhi madiki.
Kubva kunogadzira kumashure kwepfungwa mitambo isingagumi Imwechete Dash uye Imwe Yakawanda Mutsetse inouya Imwe Yekusvetuka. Pakutanga, zvinoita sekunge ishamwari inonaka kupfuura iya yaimbova ine hutsinye mazita - kunyangwe ichiripo mukati merudzi rwemukati rwehunhu hwakajeka uye mavara akajeka, protagonist iye zvino ingango pfeka grin huru. Asi usaite chikanganiso: iyi yakaoma-yakavezwa nhare dzemapuraneti yeimwe-chigunwe rudzi.
Danho rega rega rinongoshanda iwe nekusvika pakubuda, izvo zvinoda kunamatira kune chena mapuratifomu. Asi neyako grinning mraba inomhanyisa ichimhanya, zvese zvaunogona kuita kudzivirira njodzi inguva yako kusvetuka.
Iwe unofanirawo here kuda kubata mabhonasi acho munzira - yakakodzera kuvhurwa mazinga matsva - ungangoda kusvetukira pamusoro pokubuda kunze uye kurwadzisa iro rese ngazi kakawanda. Kunetsana kwacho kunogona kuitika kana uchienda kune iya yekupedzisira kusvetuka.
Iine mifananidzo yayo chunky, angled viewpoint, uye tap-to-jum-control, Looty mugomba kutanga inouya senge imwezve ini-zvakare Crossy Road clone. Uye izvo zvinonzwira tsitsi, nekuti mutambo uyu wakasiyana kwazvo - asi zvakaenzana sekuvaraidza - kurudziro.
Iyo ichiri mutambo usingaperi, asi pane kupuruzira, Looty Dungeon inoshanda iwe nekubvisa chero vavengi vakapumha mukati meiyo tuli, imwe-screen-gomba musati maigadzirira kubuda.
Kunyangwe pakutanga, gungwa rimwe nerimwe diki rinozadzwa nemapipi, madziro, miseve inobhururuka, uye marudzi ese ezvimwe zvipingamupinyi. Dawdle kureba uye pasi inodonha kubva pasi pako, rarama kwenguva yakareba uye iwe unozopedzisira wasangana naboss, izvo zvinoda humwe hunhu kukurira.
Bata zvakakwana bling pamberi pako zvisingadzivisiki kuora uye iwe unogona kutenga magamba matsva, mamwe ayo anobata zvombo zvinosimudza nzira yaunosvika nayo kumutambo, uchiwedzera kune refu hupenyu.
Kuuya senge mutambo weFlash bird wakagadzirirwa muhunhu hwaTerry Gilliam, Steamkraft is amusingly kuziva oddball tora rudzi. Chikamu chega chega chine iwe unofamba uchitenderera nyika yezvipingamupinyi zvinouraya nenzira yekunakisa contraption inoda zvinopfuura kufambisa kuenda kuchiratidzo kutungamira mudenga.
Mune yepasi pemvura, iwe inorembera kune lever kuti ifambe kumusoro kana pasi; uye nhanho ine bhasiketi yakarembera kubva kune miniature airship ine iwe uchitenderera nehurongwa muchina kudzivirira kuti urege kupunzikira muvhu kana kutyisa makunguo echimakanika.
Munguva yekutamba, zvese zviripo, mukutendeseka kwese, zvishoma zvakapusa uye dzimwe nguva zvisakanaka (zvimisikidzo zvichiratidzwa nzira yako nekusiya kufara, kazhinji zvichisiya tariro shoma yekuzvidzivirira), asi chinyowani chinhu - maringe nezvezvinoonekwa uye zvinorehwa - inopenya kuburikidza nekuona kuti Steamkraft haina zvakadaro yakakodzera mahara.
Flash mutambo Gimme Friction Mucheche akachinjisa huwandu hwenharembozha, imwe neimwe iine pfuti kusviba inopisa mabhora mune imwe-screen nhandare, akati mabhora akabva ave nekuparadzwa nemapfumo anotevera.
Hue Bhora inopa wayo spin pamusoro wenyaya, iyo inoremekedza kune yekutanga sosi asi yakangwara zvakakwana kuti ibudirire pachayo kunaka kwayo.
Pano, mabhora haakure kuti azadze nzvimbo asi panzvimbo pezvo anokura imwe danda apo iyo pulsing disc inodzokera pakati penzvimbo yechidzitiro. Kana mabhora aine zvimiro zvakawandisa, anoshandurwa kuita skulls isingagadziki inotora nzvimbo yakakosha ye-screen.
Iwe unofanirwa nekukurumidza kuparadza chero pa-screen mabhora, nepo zvakare uchiita chenjera kuti usadzore imwe pamusoro pe 'mutsara wekutonga' uyo unodzikisa sarudzo yako diki yehupenyu.
Takanzwa Perchang inonzi musanganiswa we Lemmings uye Marble Madness. Iko kubata kwekudaidzira, asi izvi zvakadaro zvakangwara kuti ungwarire simba rako repfungwa uye maitiro.
Pfungwa ndeyekutungamira rwizi rwebhora bhora kune dzakasiyana-siyana dzinobuda mukati medzidziso dzakazadzwa. Nzira dzako dzega dzekutonga mabhatani maviri, anoshandiswa kutangisa zvinhu zvemavara senge mafiripiti, magnets uye mafeni. Pakutanga, kuvharira mapundu kuri nyore, asi Perchang nekukurumidza inokwidza kuomesa, ichishandura mutambo kuva rudzi rwekutya kubhururuka chiito, mabhora achibhururuka munzvimbo yese apo iwe uchinetseka kuine nyonganiso.
Chero matambudziko mashoma, shambiso yakatenderedza flings bhora-fani mukutarisana nePenchang's ambiance ambiance, asi iwe unogona kuvabvisa ivo neinodhura imwe-off IAP.
Mu1986, Sega yakaburitsa mutambo wemujahwi unonzi Out Run. Sezvo kuti izvi zvaive mumazuva apfuura kushungurudzika, grey 'realism' yakave yakasungirwa kune akati wandei makore, zvaionekwa zvaive zvinemavara, kutonga kwacho kwanga kuri nyore, uye kutenderera kwemafambiro nepamhepo kumhanya mhanya, zvisina musoro vese vachipinda munzira imwechete.
Yekupedzisira Freeway 2R ndeye yerupo yerudo kune zita raSega. Iwe unowana yakafanana breakneck arcade racing, forogo munzira, mimhanzi cheesy, uye firati yemotokari kana iwe ukaparara. (Iwe zvakare, mune iyi vhara vhezheni, tora kushambadza, asi hazvipindike, uye zviri nyore kufuratirwa.)
Kana iwe wakura, iwe unenge uri mune zvemitambo kudenga; kana zvisiri, kukurumidza uye kusagadzikana kwechimiro cheFinal Freeway 2R pakupedzisira kunozoita kuti unzwisise kuti ndezvipi retro gamers zvavanogara vachiputira nezvazvo.
Unogona kugunun'una nezvezvitima kana iwe - zvakare - wakamirira kusvika nekukurumidza kusvika panguva yekuenda kwako kwemazuva ese, asi tamba mutambo uyu uye unozotenda nyeredzi dzako dzine rombo kuti hauna kupinda Dzidzisai Mutungamiriri Wenyika. Pano, anodzidzisa roketi pamwe, uye zvakanyanya kuenda kumusoro-pane kukoromoka.
Iri ibasa rako kudhonza matomu enguva pfupi kuti udzivise njodzi ukuwo kutumira chitima chimwe nechimwe kunzvimbo kwayo - kuri kunetesa.
Kubva kune iyo off, Chitima Conductor World inoda, uye pasati nguva refu rudzi rwe'kupenya uye zvese zvichapunzirwa mabheti 'mafungiro akapararira. Kune imwe nzira-yekutsvaga chiito-chinodzvinyirira - Kubhururuka Ndege pamateki, kana iwe uchida - chiitiko chinobatanidza uye chinonakidza.
Isu tinoshamisika kuti vanochera matongo-vekuchengetera vanozodzidziswa Hapana kana chinguva gamba ra Raider Rushakabata hunhu hwakakura hwebhiri pane tembere yekare yaanotanga kuzadza nemabota.
Kuti apukunyuke, anofanira kusungira kubva pamadziro kuenda kumadziro, kunge nhunzi inobata mweya, ichienda munzira inoenda kuzuva rakanaka, asati aziva kuti akangomira mutara inotevera kuti atize kubva.
Ne 30 mazinga espoke uye maitiro asingaperi, pane kusvetuka kukuru kuti kuitwe muRaider Rush, uye maviri-zvigunwe zvinodzora (zvekukanganisa iyo gamba kuruboshwe kana kurudyi) gadzira inofadza inonakidza yeArcade chiitiko, zvakafanana nekutambisa pamusoro (apo achifungidzira kupopotera idiot yekusiya zvinhu zvevamwe vanhu chete).
Kunyangwe kuchema kuri kure kubva mumusoro wePokémon mazita, hapana kuenda kure nekumanikidza Pokémon GO. Izvo zvakakonzerwa nemhomho dzevashandisi ve smartphone vanofamba-famba mumigwagwa nemumaruwa, vachitsvaga zvisikwa zvidiki zvavanongogona kuona kuburikidza nemahara avo.
Mukutendeseka kose, mutambo uyu uri nyore: tsvaga Pokémon, mabhora mabhora pairi, amble kwechinguva kuti abate mazai, uye shandisa yako yekuunganidza yevanotsoropodza kutora uye chengetedza chaiwo gyms.
Asi kunyangwe kurwisa kwepamberi uye maitiro emutambo wekuda kubheja yako bhatiri yeAndrew, inopinda mune yekuunganidzira pfungwa; uye muenzaniso usingawanzobudirira wekubatanidza mutambo mupasi rechokwadi, uchiwana vanhu panyama kunze uye - kuvhundutsa - kupindirana.
Nhau dzakaipa! Zvinoitika iyo Axis yeZakaipa inoda kupidigura nekukasira, nekuda kwekuwana mukana wehuwandu hwekuseka kwendege nematangi, mamwe ayo ari kukura kwemisha midiki. Zvinosuruvarisa, isu takave nezvimwe zvekubvisa, zvinoreva kuti mweya wedu wemhepo ikozvino, er, iwe.
Zvakadaro, isu tine chokwadi chekuti uchada nguva yako mukati AirAttack 2, uchitonhorera pakanaka pakanaka usati wazvipusha, uchirarama bullet-gehena, uye uchizunza chipfuva chako kurira rinorira rechestral.
Chokwadi, iwe ungatofanira kudzora magrafiki maitiro zvishoma pane akura zvechinyakare, uye zvishoma zvekusvinira kuti usvike mumazinga anotevera, asi hausi kuzoita zviri nani freebie kupfura chiitiko kudivi reHondo Yenyika III.
Tora yepakutanga 1990s FPS, uibaye mumota-yemumhanyi, wedzera dash yePac-Man, uye iwe unozoguma ne Hammer bhomba. Unoraswa mumadhigiri madhiri nemakomba akazara nezvikara zvakaipa uye unofanirwa kufamba, uchitsvaga makiyi, kupora, zvombo uye nzira yekubuda.
Matanho akaiswa zvisina mwero, achiwedzera hunhu seRoguelike kuenderera mberi, uye mutambo wacho wese unotungamirwa neyakagadzika kumusoro system. Izvi zvinoreva kuti XP ichipihwa kuuraya mitoro yakawanda, nekukurumidza kuwana iyo yekubuda, kana kuita mamwe mabasa, sekupedza quotes (iyo, mumusoro kuna Ms. Pac-Man, inosanganisira kuvhima pasi pechitoro chechikafu).
Makumi ega ega mashoma, unotarisana nemukuru mukuru-wepamusoro-soro, achienda kwairi nechombo chero chipi chaunofanira kutora, usati watiza sembwa. Pukunyuka kwenguva yakareba uye unogona kuchinjisa mari yekukwidziridza.
Pamusoro pepamusoro: kana uchinge waita 150 mari uye chinhanho 3 chinzvimbo, bata iyo radar, nekuti Hammer Bomb ine hushamwari zvakanyanya paunokwanisa kuona mhuka dzemamepu pane yepamusoro-pasi mepu.
Semunhu apukunyuka kubva kuSuper Hexagon, asi zvino akatsiga Sparkwave chete anoda kupona. Unosimuka kuruboshwe uye kurudyi, uchiedza kuramba uri munzira inochinja uye ichipaza, uchidzivisa zvipingamupinyi, uye uchichengetedza masikati chako sevhiri rinokurumidza uye richichinja.
Iyo inonakidza art chimiro uye inodedera ruzha inowedzera kumutambo kutyisa asi ichibatanidza chimiro; uye kunyangwe Sparkwave ichishaya Super Hexagon inoshamisa yekuita (kune akawanda matraki, kuvhurika uye yakasarudzika sarudzo), inoshayawo mutengo wayo-tag, ichiita kuti ive isina-brainer kurodha.
Touchscreens inofanirwa kuve isina kusimba yakakodzera pamitambo yemapuratifomu, iyo inowanzoda mhando yejekerere iyo inongouya kubva kune munyama controller. Ichi chikonzero nei akawanda mafoni mazita achisarudza auto-kumhanya, distilling chikuva mutambo wemitambo kune yayo yakakosha tsika yekusvetuka nguva.
In waruka Day, yako nyoro nyowani hunhu rakarongedzwa nekusvika pamusoro pehurefu hwakareba. Iwe unogona kusvetuka, kusvetuka kaviri uye kutsvedza pasi pamadziro, asi ndizvo. Iwe unofanirwa saka svinura zvakapfuura vavengi vekatuni uye mikuru yakakura, uchibata michero munzira.
Panzvimbo dzakasiyana-siyana pakukwira kwako ari mashopu, ayo anogona kutengwa nemichero ye20 kana nekutarisa kushambadza. Izvi zvinoreva kuti haufanirwe kutanga kubva kutanga kusvika pagwenzi. Uye kana iwe uchinge wasvika musangano, iwe unogona kudzoka zuva rinotevera kune iro nyowani chikamu kuyedza.
Kune akawanda emitambo yemitambo yePuzzle iyo inosanganisira iwe yekutsvedza mabhuruji nezve, asi Imago ndeimwe yezvakanakisa, kunyange kupa Miti! kumhanya nemari yayo.
Iwe unodhonza matiles akaenzana akatenderedza gidhi, uchibatanidza iwo emamwe mavara uye chimiro. Pakuita izvi, huwandu hwavo hunobatana, asi kana mapoka akabatana asvika kune imwe saizi, iwo anopatsanura kuita matani madiki, rimwe nerimwe richiramba mucherechedzo wechikamu chakakura. Mitambo yakabudirira inoda kunyatsogadzirira kuronga, nekungofambisa mashoma izvo zvinokwanisika kusimudza uwandu zvakanyanya, mumamirioni kana kunyange mabhiriyoni!
Kuoma kwemutambo wemitambo kunoenderana neye smart modes system iyo inokuunza iwe zvishoma nezvishoma kune zvimisikidzo zveImago. Kune zvakare yemazuva ese Flight mode iyo inopa kutenderera kwakawanda kwezvinetso zvitsva, nekuti apo yakajairwa modes anotanga kuderera. Pa Android, takacherekedza mashoma mashoma ekuona pano nepapo, asi zvikasadaro uyu mutambo-wekutora mutambo uri pakati pezvakanakisa pachikuva.
Asphalt 8 inokakavara samambo weanogadzirisa mariza parunhare, ine mhepo yemaoko uye kazhinji inomhanyisa kutora pakutyaira zvisina kunaka kuburikidza nemaguta ane mukurumbira. Asi Ridge Racer aishandisa kutonga arcades, uye Ridge Racer Inotsvedza inogadzira inobata bata iyo checkered mureza pa Android.
Uyu muedzo unobatanidzwa zvakanyanya kupfuura Asphalt, pakutanga unonzwa kuomarara uyezve kana munhu anobata munhu anofamba. Asi paunosvika pakubata nemhando inobata uye gawp panzvimbo yakanaka, zvinobva zvabuda pachena kuti Ridge Racer ndeyekutanga-kirasi yekumhanyisa mujaho, uye iyo inopa kuomesa nhanho padanho rega renzira.
Sezvaungatarisira, pane imwe IAP yekumhanyisa nzvimbo kumusoro, asi iwe haugone kutamba kuburikidza pasina nekuti kana iwe uchida kutsungirira uye kuhonya zvishoma; uye nemakosi anotaridzika zvikuru seanowanikwa mumutambo uyu, kuamhanyisa iwo haisi iko kwakaoma.
Isu tiri mafani mahombe eCrossy Road, chinova chiri chidzidzo munzira yekuvandudza yekare mutambo weArcade (Frogger), uye gadzira yakasununguka-kutamba mutambo bhizinesi iyo isina ruvengo. (Muchidimbu, kanda mari dzemahara vatambi, usaite chero chinhu kuti ubhadhare kuhwina, uye wedzera mitoro yekuedza asi zvachose sarudzo yemavara yekutenga.)
ne Disney Crossy Road, chero chaigona kunge chaitika, asi izvi zviri kure nemari yakachipa-mukati. Chokwadi, inotanga zvakanyanya seCrossy Road - kungo nyepera Mickey Mouse. Asi vhura mavara mashoma (iwe unenge uine matatu mukati memaminitsi gumi) uye unongoerekana waona wakanyudzwa mune chunky inotora mumafirimu ane mukurumbira, akadai saToyi Nyaya, Wreck-It Ralph, uye The Lion King.
Kunyangwe zvirinani, idzi hadzisi ganda chete pane rekutanga. Nyika yega yega ine zvakasiyana nezvayo, kubva padiki graphical dhaisheni iyo ichafadza vateveri, kuburikidza nekusahadzika mashivhisi munzira iyo mutambo unoitwa sei unokumanikidza kuchinja zvikuru maitiro ako.
Iwe unogona kufunga kuti pane zvitsva zvishoma mukati Alto's Kuzeza, iri musingagumi leapy mutambo Canabalt pachando. Asi zvakanatswa zvinoonekwa zvakanaka kunyangwe Monument Valley, ine ziso-kubuda-zuva / husiku kutenderera uye kwakanaka mamiriro ekunze; nekuwedzera, kune inonakidza mutinhimira, uye mhando yekusashanda kwakanaka kunoitika mukati mose, zvichikurudzira iyo Alto's Adventure kupfuura vanhu venguva yavo.
Nechisimba, mutambo weAlto's mutambo mutambo wekuunganidza wakambopukunyuka, asi kazhinji Alto ane shungu dzekufunga pamusoro pechando makomo. Unosvimha makomo, wozvifukidza nemhepo, woedza kune imwe nguva usati wadyara kumeso. Kuwedzeredza kunetseka kunosvika muchimiro chetetenheti kuti uwedzere kumhanya, uye vakuru vanobuda, vakatsamwa iwe unenge uchinakidzwa pane kugara mupeni inonamira llama.
Mushure mekubvarurwa pasina tsitsi neanonyepedzera (uyo akatenda neyakavhunika iye mugadziri we "kufemerwa"), ripararire Solitaire ndakazopedzisira ndaita kuti ive yeApp. Iyo inofungidzira solitaire yenhare, kazhinji nekuipwanya poker. Makadhi anobviswa uchishandisa poker maoko, neakawedzerwa complication ruoko rumwe norumwe runofanira kushandisa makadhi kubva kune angangoita maviri maviri mitsara.
Kuchenesa dhizaini uye nzvimbo dzekupamhidzira zvinoda zano rekungwarira uye rombo rakanaka, risingapiwi kukurumidza kuti zvakaderera maseki haana chinhu. Wina katatu uye iwe unovhura nzira yeVegas, kwaunogona kuedza rombo rako kugadzira mabheti pane hunyanzvi hwako (uye, mune zvese mukana, kurasikirwa nechikepe chekutakurisa mari yechokwadi). Pasinei nemuitiro waunofarira, Sage Solitaire ndeimwe yeanoratidzika kurasa mitambo yakasarudzika ayo anokwanisa kubata kusvika pakushupika.
In RGB Express, chinangwa chako ndechekuvaka kambani yekutumira kubva pakatanga, zvese nekudonhedza mabhokisi madiki ane mavara pazvivakwa zveruvara rumwe. Zvinonzwika nyore, handizvo here? Iyi chete iyi ndeyekuzeza kunoitika pazvitsuwa zvidiki nemigwagwa yakarongwa munzira yakaoma yegoridhe, uye yakasarudzika mitemo isingafadzi nezvekushandiswa kwemugwagwa.
Pamwe kuti uchengete pasi pekupfeka tarmac, migwagwa yakavharwa yechipiri mota inotyaira pamusoro pavo. Paunenge uchinge wapfuura matanho ekutanga, kugadzira zvese zvaunoburitsa zvinowanzoda kuita mafashoni enzira dzakafanana nenyoka kuyambuka mepu yese, zvisingaite kana mabhiriji apinda mukutamba. Pasinei zvapo neyakajeka mifananidzo, saka, RGB Express iripo zvechokwadi inonyengera uye nekunyepedzera mutambo mutambo, iyo ichave iwe iwe kupika mumashure mazera haigoneke, usati wambopaza imwe, uchinzwa chuffed uye wozotarisa mukusatenda kune zvinotevera.
In Miti! Mahara, iwe unotsvedza makadhi akatenderedzwa kutenderedza gidhi, uchibatanidza vaviri vaviri kuti vawedzere tsika yavo uye ugadzire nzvimbo yemakadhi matsva. Maitiro anouya kubva kumakadhi ese ekufambisa panguva imwe chete, pamwe newe unoda kuchengetedza nzvimbo yakasununguka kuita inotevera inosanganiswa, ichimanikidza iwe kufunga kumberi.
Pakuvhurwa, yaive yakajairika muenzaniso wetsva uye nehasha inomanikidza puzzle-mutambo mechanic. Mumazuva mashoma, yaive isina tsitsi rakabvaruka, mafungu emafashama akazadza Google Play.
Iye zvino, zvakadaro, iwe unogona kuwana chaiyo Miti! chiito chose chemahara, uye uwane chikonzero nei iri 2048 nguva iri nani pane yega yega freebie 2048 mutambo (hunhu; tarisiro kune hwakawanda; mimhanzi; zvidiki zvinhu zvemutambo dhizaini zvinoita mutsauko mukuru).
Iwe unowana 12 yemahara mitambo kutanga. Wedzera mapoka emamwe matatu nekutarisa vhidhiyo yekushambadzira. Uye iwe unogona kugara uchikwidziridza kune rwakabhadharwa shanduro kana ukanyatsovharwa.
Kune mizhinji yemahara Bejeweled gogodza-paGoogle Play, uye saka kana iwe uchikarira zvishoma gem-kushandura, unogona zvakare kutora yekutanga. Nezvikonzero zvinotipfuura isu, varidzi veApple havawane kuwanda kwema modes anowanikwa pane mamwe mapuratifomu, asi pane yekutanga mutambo-mitatu 'yekirasi', iyo isingagoni-kurasikirwa 'zen', uye yakakurumbira 'diamondi mine'.
Mukupedzisira kweiyo, mechi dzinorovera gomba muvhu. Iwe uri kutamba uchipokana newachi, uye nekufamba kwenguva chikafukura dombo rakaoma rinoda nhamburiko dzinokosha kuti dzibvise. Iyo frenetic, chiitiko chakanyanya kufunga ichi chiitiko chematatu-matatu, kunyangwe vafambi vakakwirira vanogona kukanda ziso rekufungidzira pamusoro pekupa kwekuwedzera nguva yacho nekutarisa kushambadza.
Kunyangwe paine kunze, mitambo yechinyakare yepuratifomu haiwanzobata pane vanobata. Neraki, vagadziri ve canny vatangazve iyo mhando, vachiridzosera kwadziri chaizvo. In Nyemba Zviroto, iwe batsira kusvetuka bhinzi inofamba nemhando dzose dzeengozi, nekutumira iyo inokwenenzverwa inochekerwa mhodzi kuruboshwe kana kurudyi.
Chikamu chega chega chakarongedzwa zvine hungwaru kupa nzira dzakasarudzika, kusimudzira pfungwa dzako nepadanho apo uchirova chinangwa paunenge waita zvishoma. Nguva ndeyese, saka, asi kune zvimwe zvinonetsa zvinounza mubairo kuongorora. Kuti uwane iyo ax axls yakapararira mhiri kwemepu, kana kuunganidza michero yese, iwe unofanirwa kushandisa nzira dzakasiyana, idzo dzinowedzera kukosha kwakawanda kwekutsiva.
Nitrome's fashoni chaiyo kuunganidza smart smart mitambo, iyo inokanganisa iripo yemhando nenzira dzinonakidza. Platform vhunduka kutanga inouya senge zvikuru yakareruka chikuva mutambo. Unosvetukira kusimuka uye kusvetuka, uye mutambo pamusoro wechipiri yako mudiki hunhu hunouya mhodzi.
Asi chaizvo pese pazasi ipikicha idiki iyo iwe yaunofanira kudzidza kugadzirisa; uyezve mutambo wega wega unova wekuyeuka muedzo, newe munguva nekukasira kutora ruzivo rwako sekunetseka kwese - dzimwe nguva kunoonekwa - kunotumirwa nzira yako.
In ngura Bucket, ngowani yekatuni ine pfumo rinotenderera pamusoro pegomba rine mutobvu, ichibvisa mhando dzose dzevavengi vakanaka asi vanouraya - masutu anopenya, nguruve dzakatsamwa, nenguruve dzinotsvaira. Ichi chiitiko chinotendeuka, chakafanana neye RPGs, asi chisingaperi mugomba nemuchina wakashata unochishandura kuita mutambo wePuzzle wakakwana kuitira mafambiro epasipo. Iwe unofanirwa kudzidza kuti vavengi vanofamba sei uye vanoita sei, kuronga matanho ese uye kugara uchifunga mune kamwechete kukanganisa kunogona kuperengera kutongwa.
Mune kugona kwayo kwemazuva ano, Rust Bucket zvine hungwaru zvakadzika kudzika kuti uchengetedze kudzoka nekwazvipuka izvo zvinoita kuti ive yakakodzera pamatombo e-roguelike akafanana. Zvirongwa zvenguva yemberi zvinosanganisira modite puzzle modes uye yakawedzera isingagumi yezvinhu.
Vanhu vakasuwa vanokuudza izvozvo Hondo Gorufu benzi uye kuti iwe enda unotamba mutambo wakakodzera mutambo panzvimbo iyoyo. Varege kuteerera, nekuti zita iri rinogona kupusa, asi zvakare kuputika. Vakwikwidzi vaviri vanomira pamucheto wegungwa, kubva ipapo madiki madhiri anobuda. Vanofanira saka kukwira gomba mune imwe kutora danho. Dzimwe nguva, whale kana octopus yakakura ichave iri 'gomba', uye unogona kutanha mhandu wako ne bhora. Ingo usaite bhandi navo neApple yavo kana vachinge vakunda kukunda pamwe nejammy.
Kunyangwe ichiri imwezve mumhanyi anomhanya, Kurumidza kunge Fox ane zvakawanda zvaanoenda. Mutambo uyu unotaridzika kuva wakanaka, une mumhepo yakaderera-mhando mhando inopa arty inotora pamakomo echando akaomeswa uye akasviba emadhorobha dzimba.
Kune zvakare imwe yakangwara mwero dhizaini, neimwe yeupfupi matambudziko anoda kuti udzidze nzira imwe neimwe, uye kunzwisisa kumhanya kwaunosvika kwairi kusvetuka kwakawanda, kuitira kuti usatumire yako furry shamwari kune yayo chiitiko.
Asi kazhinji isu takatorwa nenzira yekudzora, iyo inosanganisira kukwiza zvigunwe zvako kumashure kwechombo chako kukurumidzira fox. Chokwadi, inyaya, asi nzira iyi inokupa iwe pfungwa yakakura yekubatana neiyo nyururururu yemamalia, kunyange zvinyowani zvetsika dzechivanhu vanogona m'malo kusarudza nzira inonyanya kufadza mbiri-bhatani.
Isu takaona akati wandei mitambo yemahara isa mutsva mutsva pane chess, asi Chess Runner zvinosekesa zvinoshandura runyararo rwechinyakare kuva kurwa kweanopenga arcade. Iwe unotora chinzvimbo chechichena chena, uchifamba-famba mumiganhu yeL-yakaumbwa. Chinangwa chako: kurwisa nzira yako kuburikidza neyakaonda masheji uye kutora mambo wendarama.
Kusiyana kwakasiyana kwakapeperedwa pamatanho ese emitambo. Mhando yepamusoro-soro inosanganisira kuona kuti haugumi pachinzvimbo chekuti utorwe nechitema kana kutenderera matema matema. Asi dzimwe nguva iwe unofanirwa kuvhara barrage yekurwisa kubva pawns kana rook, kana nekukurumidza kusvika kuna mambo panguva yekumhanya-mhanya bvunzo. Kunyanya mune idzo dzinopesana neiyo-nguva iyo Chess Runner inochengetedza mazino ayo, kwenguva pfupi ichiita kuti ukanganwe zvese zvawakamboziva nezve chess, usati waputika kuva bhishopi.
Iko kunogara kune whiff yekusagadzikana pakukurudzira mutambo kubva kune unogadzira wakadzika mukati mechipfuva che freemium mutambo wemitambo, asi rwisana Remake zvikuru anokwanisa kuva kunakidzwa kwakawanda zvisinei imari yakawanda iwe unobheja pairi. Mutambo wacho wakawanda kana wakaderera mash-up wekutora kwemakadhi uye chaiyo-nguva zano. Makadhi anoshandiswa kudonhedza mayunitsi kune imwe-screen-kutamba uwanja, uye vanofamba-famba uye nekurongedza vavengi vavengi, vasati vatora shongwe dzemupikisi wako.
Mabheji acho ipfupi uye akakodzera kukurumidza kutamba-uye kutamba, uye kunyangwe Clash Royale yakagadzirirwa online mapundu, iwe unogonazve kugadzirisa matanho ako kupesana neyunivhesiti yekudzidzira kana iwe uchigara uchiwedzeredzwa. Kune anowanzojairwa magedhi uye magedhi ekuvandudza, asi mutambo kazhinji unoita basa rakanaka rekukufananidza iwe nekutarisana nevatambi vane hunyanzvi hwakaenzana huwandu huwandu, zvichireva kuti kazhinji kuputika uye hazviwanzo kudhonzwa.
Munyika Splash Cars, zvinoita kunge munhu wese gumbu rinoshungurudza kunze kwako. Nyika yavo yakaomarara uye imvi, asi mota yako yemashiripiti inounza ruvara kune chero chinhu chainoenda pedyo. Mapurisa haasi kufara nezve izvi uye anovavarira kuunza ako hue-based shenanigans kuvhara, nekumhanyisa mota yako mukubatwa. Kune zvakare chipoko chidiki chetangi repeturu chinomhanya yakaoma yakaoma nekukurumidza.
Splash Cars saka inova mutambo unonakidza wekutiza kubva kuhuszz, kusimudza zvivakwa zvakapfuura nehupamhi hwebvudzi, kutora peturu nemari zvisina hanya zvakasara zvanyepera, uye kuyedza kurova donhwe-rakapetwa ratidziro isati yapera nguva. Budirira uye iwe enderera kunzvimbo dzakakura uye dziri nani, uine mota dzine simba.
Inoshamisira yakakurumbira iOS mutambo wakawana pamusoro pemamirioni maviri ekurodha mukati mevhiki yekutanga yekuwanika pane Android uye kunyangwe zviwanikwa zvinoteedzana uye zvakapindirana, ichiri mutambo wakanaka kutamba.
Iyo Android vhezheni ye Shiri dzine hasha ndeye yemahara, kusiyana neyekuburitswa kweApple, nemugadziri Rovio achifambisa kunamatira kushambadza shoma pachiri pane kubhadharisa mari yepamusoro. Mhedzisiro yacho ndeyemhando yepamusoro uye inonetsa kwazvo yefizikisi inonzwisisika yakasvibiswa uye inyanzvi. Zvemahara. Iyo inoshoreka mitemo yese yekutengesa kwazvino.
Tine chokwadi chekuti ino ichavhiringidza boka revanhu, asi kana iwe uri weimwe mazambiringa, Heist uchaita here kuti usvinire nekufunga. Chaizvoizvo Nintendo Game & Tarisa kune yako Android kifaa, iine chidiki chap inobira bhangi. Zviratidzo zvinonyatsomutsa zvidhori zvekare, uye kunyangwe mutambo wacho uri nyore - fambisa kuruboshwe uye kurudyi, dzivisa zvinhu zvinowira, mutoro wakakomberedzwa mari mubharuni - kuwana mamakisi-akakwirira kunoda kutarisisa kwakakomba uye kugunun'una kwechigunwe.
Pane yakasarudzika saizi smartphone, iwe ungatofunga kufunga kuti urikutamba chaicho chinhu. (Uye kana paine munhu anobva kuNintendo ari kuverenga, ko zvakadii neimwe yepamutemo Mutambo & Tarisa pane Android? Zvirinani izvo kupfuura chero nhamba ipi neipi yemadodemi freemium mitambo yakavakirwa zvakasununguka pane vanhu vane mukurumbira vaNintendo.)
Nechinangwa, Flappy Shiri yaive zvishoma marara, asi yakabvuta toni ye'mitero '. Vazhinji vacho vaive marara futi, asi Flappy Gorofu zvakawanda hazvisi. Izvo zvakatanga sekuseka - mugadziri achifungidzira iyo yakanakisa Super Stickman Golf 2 uye Flappy bird mechanics. Panzvimbo pekutarisa bhora rako, rine mapapiro uye unorifuridza rakanangana negomba nekutepa 'kuruboshwe' uye 'kurudyi' mabhatani.
Neimwe nzira, izvi zvese zvinouya pamwe uye Flappy Gorofu yakaenzana iyo mutambo wavakirwa - inokurumidza, inosekesa uye inonetsa, ine mizhinji yemakosi uye akawanda. Izvo zvekushambadzira-kushambadziro zvinokatyamadza, pfungwa, asi zvikasadaro iyi ndiyo imwe yemitambo yemahara yemahara iwe yaungambove iwe uchitsvaga yeApple, kunyangwe 'Flappy' iri muzita rayo.
Zvimwe zvakanaka kutaura kudaro Hapasisina Mafambo iri parutivi rwechokwadi nezve aesthetics, asi ipapo izvo zvinongoisa iwe mupfungwa dzeaya chess mapuzzle iwe aunowana akatwasuka mumapepanhau. Musiyano uripano iwe unobata mambo nekutora zvidimbu uye nekukurumidza uchiva chimedu icho. Nenzira yemuenzaniso, bata bhishopi uine rook uye ndeye 'diagonals chete' kune yako inotevera kufamba.
Kutsvaga nzira yako kune korona kuri nyore pakutanga, asi anowedzera kuomarara mumazinga anozotevera, apo bhodhi rinoputika nezvidimbu uye nzira yekuita nzira haisisiri pachena. Iyo masterstroke: kusunga nyeredzi dzakapihwa yekupedzisa mazinga kusvika kumhanyisa kwaunosvika mhinduro. Speed ​​chess vatambi havazovi nechako pane yako deft manhamba mumutambo uyu.
Nemhando yacho yakanaka yesometric yekuona, hoppy instadeath mechanics, uye huwandu hwevatambi kuhwina mu semi-randomized lottery, unogona kuregererwa nekufunga Down The Mountain ari Crossy Road yakakwidzwa. Kunyange paine kufanana, inokurumidza kuva yakajeka Down Gomo mutambo wakasiyana kwazvo wekutamba. Kubhadhara kubva kuQ * Bert kwete Frogger, ine iwe unokanganisa kusvetuka gomo risingaperi, pane njodzi dzinouya dzakakora uye dzichikurumidza. Kunyangwe pane nyore nzira, iwe unofanirwa kufunga nekukurumidza, kusvetukira kuruboshwe kana kurudyi kuti udzivise TNT, motokari dzinosunga, uye spikes dzinotyisa. On hard mode, haina kunyanya Kutsika Gomo kunge Down T— Ah. Wakafa futi.
Isu tese tinoda zvishoma zveTetris, asi Tetris haadi mafoni - epakutanga uye neazvino maumbwe evaMicrosoft anonyangadza IAP-akaiswa zvinyadzo. Neraki, ipapo, Kurota kwePixels iripo, yakawanda kana isingadiki irikupepeta Tetris mudenga-pasi, kuve uchishandisa izvo zvakajairwa maficha kutora chunks kunze kusingaperi gore rebhangi.
Mutambo wacho wakadonha uye zvishoma zvishoma hippyish vibe yakahwanda isingagumi puzzler nekuruma kukuru. Kamwe gore rinenge richimhanya nekumhanya uye uine mashoma 'nherera' mabheti ayo anoda kubatana zvakare nemuviri wakakura, Kurota kwePixels kunova kunononoka kumedza muedzo wekugona-kwechimiro. Kana zvese zvawana zvishoma, pane iyo inonzi 'zen' mode, paunozadza zvimiro zvechipegani neasati-akatsanangurwa tetromino seti. Uye kana iwe wagadzirira chiito zvakare, imwe-off IAP inovhura matatu akasiyana akasimba pane iwo mutambo mukuru.
Murombo Cally. Zvakafanana nekuti haakwanise kuenda kwemaminitsi mashanu pasina vabereki vake vakapambwa. Kechitatu nguva isingafarire iye mukati Cally's Caves 3, asi ndine rombo rakanaka iwe, nekuti iwe unowana yakanakisa yechikoro-platformer iyo isingabhadhare chinhu zvachose. Cally anokwakuka pamusoro, kupfura uye kurova vavengi nenzira inonakidza iwe unogona kufunga zvisingaiti kumusikana wechidiki ane pigtails.
Iwo mutambo une hutsinye, zvakare, uine cheki cheki system iyo ichave inokugeda-geda mazino kana iwe ukafa nhanho shoma pamberi pechekutangira. Asi iyo chombo yekuvandudza system ndeyekuchenjera (ramba uchapfura zvinhu kuti upe simba pfuti!), Kune zvinhu zvakawanda zvekuzeya, uye kusiyana neZPS, iyo yemahara Android vhezheni ine akati wandei awavhurwa modes.
Isu tinogara takaomarara nezvekukurudzira vanhu vekutanga kupfura pafoni, nekuti kusvetukira pagirazi skrini hakusi kutsiva kuve ne gamepad mumatanitsi ako. Neon Shadow, zvakadaro, ine chipenga chakanaka pakupa yakakwirira-octane shooty chiito pane Android, zvakanyanya kuburikidza neyakajeka level dhizaini, nyore kutonga, uye kuva protagonist izvo zvinoshamisa robust.
Iyo nyaya inowana iwe uri mukati mekunzwa nzvimbo chiteshi iyo yaenda nuts uye akatendeuka ayo ese-bhodhi michina yakaipa. Neimwe nzira (uye isu hatinyatso kusaziva kuti), izvi zvakaisa gwara rose munjodzi. Saka iwe unofanirwa kuenda kunopusha zvese kumusoro, uye urege kuurayiwa zvinotyisa. Chinyakare-chikoro, chinotaridza mucheka, uye chisingamboregi. Izvo chete apo neapo pane iyo-skrini-inodzora inoita kuti iwe ugopika pahombodo dzako.
Kana iwe wakambotamba Pac-Man kare, iyo chinangwa cha Pac-Man 256 inofanira kuratidzika kunge yakajairika: idya mapelleti akawanda sezvinobvira pasina kubatwa nemweya wegonyeti. Panguva ino, zvakadaro, hazviperi. Iwe unowana simba-kumusoro munzira, uye chaizvo ine nzira inonzwisisika yekutenga-mu-kutenga kutenga.
Kwakafanana chaizvo mune dhizaini uye pfungwa kune Xbox uye Xbox 360 retro classic Geometry Wars. Muchokwadi, mumwe anogona zviri pamutemo kugona kubva nekudana icho chakasakara kubvaruka. Android PewPew idombo-yakaoma 2D kupfura mutambo wakazara neimwe nzira mutambo.
Iyo yakaoma zvishoma kutenderera kumapeto uye inoda foni ine simba kuti ifambe mushe, asi kana ichiita chinhu chinonakidza.
Iri kure zvakanyanya neyakaomesesa pinball kuedza paGoogle Play, asi isu zvakadaro tinonyanya kufarira Vector Pinball. Iyo ine mhando yekusakara-chikoro kunzwa nezve yakananga tafura dhizaini, uye chimwe nechimwe chezvikamu zvina zvinoda iwe kuti udzidze zvinyamusi uye misheni yekutanga, kuitira kuti uwane mamaki makuru.
Aesthetically, inoedzawo chimwe chinhu chakasiyana kubva kune venguva yavo. Panzvimbo pekurongedza matafura chaiwo, Vector Pinball yose mitsara yeganda uye nemavara akajeka - sekunge mumwe munhu akadzvinyirira yakanakisa pinball simulator muVectrex - uye inofadza zvigadzirwa zvemagetsi uye mimhanzi inofambidzana neyako-kurova bhora.
Vector Pinball yakavhurika zvakavhurika, zvakare - iri pachena sosi mutambo, uye pane kunyange yekuedzwa yekugadzirisa yekugadzira yako tafura.
Kufamba kwechando kupenga. Iwe unotamba chikamu chemurume munyoro, kunze kwekufamba kwemanheru. Nguva nenguva mhepo inotora, saka unofanirwa kubatirira pachipfuva chake kuti chimurege kufuridza.
Izvi zvichiri kuitika, iyo chap mukati yemonikoputa inoonekwa pachiratidziri, ichikupa iwe unonakidza uye inokanganisa kuverenga mukuita, zvakare. Chakareruka, asi chakakwana chidiki chakakwira chikoro chinetso mutambo wenguva yekubata.
Pakati payo, Crossy Road isingaperi kutora pana Frogger. Idzi diki protagonist inosvetuka svetuka, ichipinda-pakati penzira, uye inofamba-famba ichitevedza nzizi nenzira dzemvura dzakadzika.
Kuwedzera kumatambudziko ako: matreni echitima, kwaunogona kubata iyo 10: 47 kuenda kuWaterloo nenzira inowedzera uye inotsemuka pane yaungatarisira, uye gondo guru rinorova kana uchifanira kubvapo.
Chaizvoizvo, hachisi chinhu chitsva, asi ipo Crossy Road inopenya mukuita kwayo. Iwo magirafu acho akanaka (uye agara achibvunzwa); iyo F2P system yakanaka - kunyange ine rupo; uye mavara aunogona kuhwina kana kutenga anowanzo shandura mutambo, muenzaniso wakanyanya kupfuura uri 'Crossy Pac-Man', wakasungirirwa neiyo yakafanana naPac-Man 256 yakafanana.
Wafa pa Kusvika inotaridzika kutaridzika 3D kupona inotyisa mutambo, iyo inokurasa iwe muchipatara yakazara ne zombies. Iwe unobva waedza kusadyiwa nekutenga zvombo zvitsva, kukwira masuo kuti varambe vachidya-pfungwa vachidya uye vachishandisa zvimadziro zvakaiswa pamadziro kukurudzira zombie mincing process.
Sezvinoitwa nemazita mazhinji emazuva ano eAlp, pane sarudzo yekubhadhara zvinhu mukati memutambo kusunungura maficha uye kubvisa shambadziro - asi haufanirwe kudaro.
Super Bit Dash ndeye retro-yemaitiro 2D papuratifomu mutambo, iine masimba akapusa senge pixel art dhizaini. Mutambo unomhanya uchingogara uchimhanya, saka zvese zvinofanirwa kuitwa nemutambi kusvetuka uye-yakakosha-kusvetukira panguva chaiyo kuti udzivise kupaza munzvimbo. Zviri pachena kuti yakanyanya kuoma kupfuura zvinoita kuti iite ruzha.
Mushure mekugadzira Splash pa iOS, Fallout pekugara ikozvino yave kuwanikwa pane Android kune vese imi Wasteland nzungu. MuShelter, iwe unogadzira vhuru uye unoizadza nevanopona-nehondo-vapukunyuki vehondo, kuwedzera nzvimbo yako yepasirese, kukwidziridza vaunogara, uye kuitumira kuti iongorore iwo nzvimbo yasara kumashure.
Kutya kwekutama kubva kunogadzira Rovio, mukuti uyu hausi nyore kutora pane Angry Shiri maitiro. Zvakaipa Piggies ndeyekuchenjera kuvaka mutambo, uyo anokurasa iwe pakutanga kwemepu hombe ine murwi wezvikamu zvezvinhu. Iwe unobva wavaka muchina unobhururuka uchishandisa izvo zvakapihwa zvinhu, wobva waedza kubhururuka kusvika kumagumo ezinga. A yakanaka chaizvo, yepakutanga pfungwa diki kubva kune fizikisi mutambo nyanzvi.
Dziviriro Yemagetsi inonakidza tambo yekudzivirira mutambo, yakapihwa inopenya kutaridzika kwemazuva ano. Unoita zvese zvakajairwa shongwe yekudzivirira zvinhu sekuvaka zvombo zvako simba uye kusarudza kuti zvakamira sei kumisa usingaperi wekufamba muvengi, uine mamwe "zvombo zvepamusoro" kuvhura uye mazana pamazana emafungu kuti arove. Uye zvese zvinotaridzika zvakashamisa kwazvo padanho hombe rakavhenekerwa.
Muzera rino rekusagadzikana nekukasira, tese takareba kubva takatengesa yedu yekupedzisira dominoes uye yakanyungudutsa pasi Monopoly yedu yekuverenga yekukanganisa.
Iyo zombie yekupfura Dead Remake yakarongedzwa mune yeramangwana dystopian ye2012 ndiyo testamende kune kwayo kusingaperi kukwezva. Frantic yekutanga-misheni yekutanga yakaiswa mune dzechokwadi 3D nharaunda ine chokwadi chekuwana mwoyo wako kumhanya (kunze kwekunge uri zombie), kunyangwe pane zvidiki zvidiki.
Akanaka mutongi Om-Nom mune Chekai Rope ndiyo Danieri Zuva-Lewis yemitambo yemapuzzle, ine BAFTA mukati mekutakura kwake mibairo yemitambo. Nzvimbo iri nyore (kutema tambo kuti dzisunungure masikati-Om-Nom) inotsigira pamusoro pe400 yakadzika mushe mushe, yakarongedzwa nehunhu uye katuni yekarati.
Ehe, wakapenga pamhepo kadhi mutambo wepamhepo Hearthstone yakave yakaganhurirwa pasi kuti ikwane foni yako kana piritsi rebhokisi - uye inoshanda zvinoshamisa. Nenzvimbo diki yekutamba nayo, vagadziri vakagadzirisa dhizaini racho zvishoma; ichiri yakafanana mutambo, uchingotarisisa kune zvigunwe zvako.
Izvo zvakare zvichineenderana netafura uye desktop shanduro kuitira kuti iwe ugone kutamba kupesana neshamwari dzako pakufamba.
Ehe zvakakodzera Scrabble, kwete zvimwe zvinotyira kodzero yekukanganisa inozo dhonzwa nenguva yaunoverenga mazwi aya. EA yakatenga rezenisi, ikachimedura ndokuchiisa paGoogle, apo inoshambadzira zvinoshamisa uye mu-app yekutenga zvemahara ruzivo.
Yakave yakagadziriswa neine mashoma modes, asi zvinhu zvakaita sekukwirirana ne Facebook uye kutamba akawanda macheti ndizvo chaizvo zvaunoda. Yeplassical isina kukuvadzwa. Hooray.
Blip Blup Ndiwo mafungiro epakutanga diki isu tinoda kugumburwa. Iyo yemhando yegeometry-based puzzle mutambo une iwe uchimanikidza matinji pachiratidziro kuti uzadze nzvimbo dzeruvara.
Mhezi dzako dzakajeka munzira idzo dzavanogona kufamba nadzo, saka, kana iwe uchinge wapfuura nemazinga ekudzidzisa akadzikama, zvinobva zvanyatsoomarara uye zvichakurumidza kuve nekukanda kuburikidza nebanda dehenya rako uye pfupa kusvika wanyatso tsvaga yako CHIDZIDZO mukuvhiringidza. .
Kunyanya kukakavara nekuda kwekushandiswa kwayo kwekushandisa mukati-kati kutenga nzira yako kumotokari dziri nani, nekukurumidza nguva yekutamba uye zvimwe zvakawanda, pane chikonzero chimwe chete chaunofanira kunyatsopa Real Racing 3 kuenda - iyo yakanyanya kutaridzika 3D racer pane Android nemamirimita.
Kana iwe uchida chimwe chinhu chinopa zvese, zvese zviri zvina, kana kunyange zvisere zvizere zvefoni yako cores ndeye yakazara Workout, iyi ndiyo. Uye iwe haufanire kubhadharira chero chinhu, chero bedzi iwe usingafarire kutarisa nguva uye kumirira yakawanda.
Iyi inofanira kuve yakapusa. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kunongedza iyo skrini panguva chaiyo, saka unomhanyira kune inotevera yekuchengetedza nzvimbo. Dambudziko nderekuti kune timer - yakamhara kwenguva refu uye unoputika. Uye nzvimbo dzakachengetedzeka dzinogara dzakakomberedzwa nekutenderera spikes, kana nhovo dzinokuisira kuti upinde mune inouraya vacid.
Imwe Dhivha nokudaro rinova muedzo wakasimba wetsitsi uye maitiro, apo imwechete isina kurasikirwa-nguva tapita inogona kupedzisa kuguma kwekupedzisira kwakanyanya kunakidza kwekutsanya.
Renyeredzi riri Fire 2 HD ndeimwe yeanoratidzika anokwezva 3D vanopfura kuti awanikwe pane Android, Galaxy pane Fire 2 zvakare chucks mune kumwe kutengesa uye kuongorora kutamba kuti awedzere zvishoma kudzika pakurwa, achiigadzira ichi kuita chimwe chinhu chakafanana nekuve neyako diki inotakurika Eva Online . Iwe unowana zvakare kutamba semutobvu chimiro chinonzi Keith, chinova chiri chinonakidza rarity.
Iyi inguva yekare gem. Badland is a abstract physics platformer mhando yechinhu, paunoridza chikopokopo chinofanirwa kufamba mimwe mepu dzakanaka uchiteerera kuimba kweshiri. Masimba-kumusoro uye emagetsi-pasi anowedzera uye nekuderera kukura kwebhugi rako, zvakare uchizviwanza kusvikira iwe uchidzora zvinoverengeka zvezvinhu. Kupfeka uye kusviba uye kunonakidza. Chaizvoizvo izve.
Chokutanga chaive chakanakira kufambisira mberi kutarisirwa kwevatengi kwema brand makuru ese iwo vakaita imwe imwe - yakakodzera zita Angry Shiri Nyeredzi Hondo II. Izvo zvemahara zvekutenda nekuda kwekushambadza-kunotsigirwa, izvo, zvinoitika, kwakanaka pane kubvunzwa kutenga yekufungidzira nzvimbo yemari ega ega 30 masekondi. Mazhinji mazinga uye akapusa Star Wars mareferensi galore anoita ichi chisinga-brainer kune vateveri vekuti ingave yakakura kwazvo-franchise.
A anokwezva madiki emucheche pasi, umo chap yako chidiki chinodzedzereka kuvhima pfuma. Iyo inoratidzira mukati-mekutenga, asi yakafa yakapusa kumedza zvishoma kuti uunganidze hupfumi uye kuvhura izvo zvakawanda zvemukati zvemutambo nemaoko, kunyangwe iyo $ 2.49 mari inokwenenzverwa inotanga kutarisa inoedza mushure menguva pfupi. Mutambo mudiki unodakadza, zvakadaro, nekukuya mepu dzayo quirky iri mufaro chaiwo zvakadaro.
Mukati iyo Angry Ndege shanduro iyo ine kuenda mukudhonza kunze kweFlash bird bird mutambo. Retry inopfuura kungoita seyakareruka, asi ichisuma kutyaira ndege, inofamba zvishoma nezvishoma kufamba uye kusimuka kwekutakura nzvimbo. Zvakaoma, zvakanyanya, asi iwe haupfuuri kuwana yakawanda yekufambira mberi uye mubairo kupfuura zvaive zviripo mune inopfuura Flappy.
Yakanakisa mitambo yePC kutenga 2022: Anonakidza mitambo yekuwedzera kune yako yekuunganidza
Wepamusoro 45 mitambo yemahara yemahara yaunofanira kutamba muna 2017